အငျးယားလမျးက ခဈြဇာတျလမျး – My Blog
မ … အဝတျတှေ လဲလိုကျပါလားဟငျ … ခေါငျးကိုကျနတေယျဆို …” “အငျး … မောငျ … အပွငျခဏထှကျပေးနျော …” “နောကျဖေးမှာ သံပုရာသီးရှိလား …” “ဘာလုပျမလို့လဲဟငျ …” “အျော … မောငျ့မိနျးမက … ခေါငျးကိုကျနတေယျမှတျလား … သံပုရာရညျလေး ဖြျောတိုကျမလို့ပါဗြာ” “ဘာ … မောငျ့မိနျးမ လဲ … ဟှနျ့ …” “မဟုတျလို့လား … မရယျ … ဟောဒီမှာကွညျ့ပါအုံး … လကျထပျစာခြုပျ … မ နျော … အခုမှ … ဘှာတေးမလုပျနဲ့ …” “ဟာကှာ … မောငျနျော … သိပျမစနဲ့ကှာ … တို့ အရမျးရှကျတယျ … ခဏအပွငျထှကျပေးနျော …” “အငျးပါ … အငျးပါ … သံပုရာသီး ဘယျနားထားလဲဟငျ” “ရခေဲသတ်ေတာ အောကျဆုံးဆငျ့မှာ” “အိုကေ … ဖွေးဖွေးလဲနျော” မောငျ … တံခါးလေးပိတျပွီး … အပွငျထှကျသှားတယျ … ရငျစအေ့ကငြ်္ီလေးကို … ခြှတျလိုကျပွီး … အောကျခံဘျောလီကို … ဝတျသငျ့မဝတျသငျ့ … စဉျးစားလိုကျပါသေးတယျ … ကြှနျမတကိုယျလုံး ခြှေးစေးတှနေဲ့ ကပျစေးနတေော့ … မဝတျခငျြတော့ပါဘူး … အရငျတုနျးကလညျး … ကြှနျမ အရမျးအိုကျရငျ … ဝတျလမေ့ရှိပါဘူး … အောကျခံဘျောလီလေးကို … ခြှတျလိုကျတော့ … သားကောငျးမိခငျ ရငျနှဈမှာက … ဖှံ့ဖွိုးတငျးရငျးနသေညျ …
မနကျကလေ … မောငျ အရမျးနမျးတော့ … ကြှနျမကော့ကော့ပေးတဲ့အဖွဈက … သိပျရှကျဖို့ကောငျးတာပဲ … မောငျနမျးတာ … မနနေိုငျလောကျအောငျ ဖွဈပွီး … ကော့ပေးလိုကျတာ … မကောငျးပါဘူးရှငျ … မောငျ … ထိပျဖြားလေးကို … အတငျးလိုကျရှာတုနျးက … ကြှနျမ ရငျတှေ လှိုကျဖိုမောခဲ့ရတာ … မခံစားတတျအောငျပဲရှငျ … အို … ညကရြငျ … မောငျက … ကြှနျမတကိုယျလုံး နမျးမှာပေါ့နျော … ဟငျ့ … ရှကျပါတယျမောငျ ရယျ … မှနျတာဝနျခံရရငျ … မောငျနမျးတာကို … ရှကျပမေယျ့ … ထပျပွီး အနမျးခံကွညျ့ခငျြပါသေးတယျ … ရငျထဲမှာ … လှိုကျကနဲ … ဖိုကနဲ ဖွဈသှားတဲ့ ခံစားခကျြကို … မမနေို့ငျတော့ပါဘူးရှငျ … ထမီလေးကို … ခြှတျလိုကျပွီး … ကြှနျမ ညဝတျဂါဝနျလေးကို … လဲနတေုနျး … မသင်ျကာလို့ … လှညျ့ကွညျ့လိုကျ တော့ … တံခါးလေးက … ဟစိလေး ဖွဈနပေါတယျ … အို … မောငျလေ … … ကြှနျမအကငြ်္ီလဲတာကို … ခြောငျးကွညျ့နတေယျ … မောငျ … တျောတျော လညျတယျ … ခုနက … တံခါးသခြောပိတျသှားတာမှ မဟုတျပဲ … ကြှနျမလေ … မောငျ့ကို … ကွောကျလာတယျ … မောငျက … ကြှနျမကို အလှတျပေးမှာ … မဟုတျတာ သခြောသှားပွီ … ဟငျ့ … မောငျနဲ့ ကြှနျမ … ခဈြတငျးနှောကွရငျဖွငျ့ … ကြှနျမလေ … ခွဖြေားလကျဖြားတှေ အေးစကျလာပါတယျ …
“ဟာကှာ … မောငျ … အရမျးဆိုးတယျ … တို့ အဝတျလဲနတော … ခြောငျးကွညျ့ရသလား” “မ … က အရမျးလှတယျနျော … မောငျအရမျးကံကောငျးတာပေါ့ နျော …” “အို … သှားပါ …” “ဘယျသှားရမှာလဲ … မရဲ့ … မင်ျဂလာဦးမှာ … သတို့သားကို … အဲဒီလို မနှငျထုတျရဘူးလေ …” “အို …” ကြှနျမ … မကျြနှာလေး … ရှကျသှေးဖွာသှားပါတယျ … “မရှကျပါနဲ့ မ … ရယျ … အခု ခေါငျးမူးနသေေးတယျ မှတျလား … ရော့ … သံပုရာရညျလေး အရငျသောကျလိုကျနျော … မ” “ကွညျ့စမျးပါအုံး … မ ရယျ … ခြှေးတှခေညျြးပဲ … ခြှေးနဲ့ အအေးပတျကုနျတော့မှာပဲ …” “အငျး … ခဏနေ ခွောကျသှားမှာပေါ့ … မောငျရယျ …” မောငျ ဖြျောလာတဲ့ … သံပုရာရညျ ခဉျြခြိုလေးကို … သောကျပွီး … ကြှနျမ ခေါငျးမူးတာ နညျးနညျး သကျသာသှားသညျ … အငျး … ဒီလိုတော့လညျး … မောငျက … ခဈြတတျသားပဲ … “မ … ခေါငျးမူးနရေငျ … ခဏလှဲနလေိုကျနျော …” “အငျ …” လှဲနရေမယျ … မောငျ့အကွံ ဒါအကုနျပဲလားဟငျ … မောငျနဲ့ နှဈယောကျ ထဲ ရှိတုနျး … ကြှနျမက … လှဲနရေငျ … မောငျ့အကွိုကျဖွဈသှားမှာပေါ့ … ကြှနျမက … မောငျ့ကို … ကွညျ့လိုကျတော့ … မောငျ့ပုံစံက … ရိုးရိုးသားသားပါပဲ … “မ … စိတျထဲမှာ … မောငျ … အတငျးဖကျနမျးမယျမြား ထငျနလေို့လားဟငျ …” “အို … မဟုတျပါဘူး … မနကျကလိုဆိုရငျ … တို့ ကွောကျတယျ …”
“ဟား ဟား ဟား … မနကျတုနျးက … ပြျောလှနျးလို့ ဖကျနမျးလိုကျတာပါဗြာ … လာလှဲနလေိုကျနျော … မောငျ နှိပျပေးမယျ … လာ … လာ” ကြှနျမလေ … မ လှဲခငျြလှဲခငျြနဲ့ … မှယေ့ာပျေါကို … လဲကသြှားပါတယျ … မောငျက ဘေးမှာလာထိုငျပါတယျ … ကြှနျမက ပကျလကျကလေးပေါ့ … မောငျလေ … ကြှနျမ မကျြခုံးလေးကို … စနှိပျပေးတယျ … မောငျက ရိုးရိုးသားသားနှိပျပေးပမေယျ့ … ရငျတှေ ခုနျနတေဲ့ … ကြှနျမက … မရိုးသားတာလားဟငျ … ညဝတျဂါဝနျ အောကျက … ရငျနှဈမှာက … ဖားဖိုကွီးလို … မို့လိုကျ ဖောငျးလိုကျနဲ့ … စိတျလှုပျရှားနတော … မောငျ တှမှေ့ာပါလေ … “အို … မလုပျပါနဲ့ … မောငျရယျ … ငရဲကွီးကုနျပါ့မယျ …” “မကွီးပါဘူးကှာ … မကျြစိလေး မှိတျထားနျော … သခြောနှိပျပေးမယျ” လေးငါးမိနဈလောကျ … မောငျ … သခြောနှိပျပေးပွီးနောကျ … “ဘယျလိုလဲ … အနှိပျခံရတာကောငျးတယျမှတျလားဟငျ …” “အငျး … မောငျက တအားတျောတာပဲ …” “မ … နညျးနညျးနာမယျနျော … ဒီ ငယျထိပျက ဆံပငျစုလေးကို … ဆှဲပေးမယျ …” “အရမျးနာအောငျ … မလုပျနဲ့ မောငျရယျ …” “သိပျမနာပါဘူး … တမိနဈပဲ ဆှဲမှာပါ … ဒါမှ မ ခေါငျးထဲက … အပူတှေ ပြောကျသှားမှာ …” “လုပျကွညျ့လေ … နာရငျတော့ … အျောမှာနျော …” မောငျ … ကြှနျမ ငယျထိပျနားက … ဆံပငျစုလေးကို … ဆှဲလိုကျသညျ … “အား … နာတယျ … နာတယျ … မောငျ … လှတျကှာ … အရမျးနာတယျ …” “ခဏလေး … ခဏလေး … တမိနဈပဲ …” “ဟငျ့အငျး … ဟငျ့အငျး … နာ တယျ … မောငျရယျ … လှတျပါတော့ …”
ကြှနျမလေ … နာလှနျးလို့ … ယောငျယမျးပွီး … မောငျ့ပေါငျကို … ကိုငျထားမိတယျ … မောငျ့ရဲ့ပေါငျကလေ … မာတောငျ့နတောပဲ … မောငျက … ဝိတျ သှား သှား မထားတော့ … ကွှကျသားတှကေ … မာပွီးတငျးနတောပဲရှငျ … ကြှနျမ … မောငျ့ပေါငျကွီးကို … ကိုငျလိုကျတော့ … မောငျလညျး တှနျ့ကနဲ ဖွဈသှား တယျ … “အခု … အပူထှကျသှားပွီမှတျလားဟငျ” “အငျး ဟုတျတယျနျော … မောငျက အရမျးတျောတာပဲ” “တျောရမယျလေ … မရဲ့ မောငျပဲဟာ … ဟဲ … ဟဲ” “မောငျ … ဖယျတော့လကှော … “ “ဟငျ့အငျးကှာ …” “မောငျနျော … ဖယျပါကှာ … တို့ ကွောကျတယျ …” “ဘာကို ကွောကျတာလဲဟငျ …” “မောငျ့ ကို ကွောကျတာ …” “မောငျက … ဘာလုပျလို့လဲဟငျ …” “အို … မောငျနျော … သိရဲ့သားနဲ့ … ဟိုလေ … ဟာကှာ … တို့ … ကွောကျနတေယျကှာ …” “အငျး ပါ … မရယျ … ဘာမှ မလုပျပါဘူး … ခွလေကျမကျြနှာ သှားဆေးလိုကျနျော …”
“အငျး …” ကြှနျမ … ရခြေိုးခနျးထဲ … ဝငျပွီး … ခွလေကျမကျြနှာဆေးရငျး … မထူးတော့ပါဘူး … တကိုယျလုံးက … ခြှေးစေးတှနေဲ့ … နံနသေလို ဖွဈနေ တော့ … ရခြေိုးလိုကျတယျ … တျောကွာ … မောငျနမျးလို့ … အနံ့ထှကျနရေငျ … အထငျသေးသှားမှာ စိုးပါတယျ … ကြှနျမရဲ့ ရငျနှဈမှာကလေ … အရမျး တငျးပွီး … ထိပျဖြားလေးတှကေ … ထောငျနပေါတယျ … ဘာကွောငျ့မှနျးမသိတဲ့ … ခံစားခကျြတမြိုးကို … ရငျထဲက … တောငျ့တနပေါတယျ … မောငျ့ရဲ့ အ နမျးတှကေိုလား … မောငျ့ရဲ့ အထိအတှတှေ့ကေိုလား … မပွောတတျပါဘူးရှငျ … ပေါငျကွားက ရှကွေုပျလေးထဲမှာလဲ … ခြှဲပွဈတဲ့ … အရညျတှနေဲ့ ကပျ စေးနပေါတယျ … သခြော ပှတျတိုကျဆေးကွောပွီး … အတှေးရိုငျးလေး … ဝငျလာပါတယျ … ညကလြို့ … မောငျနဲ့ ခဈြတငျးနှောရငျ … မောငျက … ကြှနျမရဲ့ … ရှကွေုပျလေးကို … နမျးမှာလားဟငျ … မနမျးလောကျဘူးထငျပါတယျ … မောငျ ဘုနျးနိမျ့သှားမှာပေါ့ … ဟငျ့အငျး … မနမျးခိုငျးရကျပါဘူး … အို … ငါ ဘာတှေ လြှောကျတှေးနတောလဲမသိပါဘူး … ဒါပမေယျ့ … အတှေးတှကွေောငျ့ … ကြှနျမ တကိုယျလုံး … တောငျ့တငျးနပွေီး … တဈခုခုကို တောငျ့တနေ တယျဆိုတာ … လိမျလို့မရပါဘူးရှငျ … မောငျခဈြခငျြလညျး … ခဈြပါစတေော့ … အပြိုစငျပနျးဦးလေးကို … ခြှမေယျဆိုလညျး … ခြှပေါတော့ … မောငျရယျ … တို့ … ခှငျ့ပွုရမှာပေါ့ … ဟုတျဖူးလား … ရခြေိုးပွီးနောကျ … မကျြနှာသုတျပဝါကွီးကို … ကိုယျလုံးလေးမှာ ပတျပွီး …. အပွငျထှကျလာတော့ … မောငျ စောငျ့နပေါတယျ …
“အို … ဒုကျခပါပဲ” ကြားရှေ့ မှောကျရကျလဲသလိုပါပဲ … မကျြနှာသုတျပဝါက … တောငျ့တငျးကဈြလဈတဲ့ … ကြှနျမကိုယျလုံးလေးကို … လုံခွုံအောငျ … ဘယျကာထားနိုငျပါ့မလဲရှငျ … ဖှံ့ထှားတဲ့ … ရငျနှဈမှာက … တဝကျလောကျပျေါနပွေီး … ဖွူဝငျးတဲ့ရငျသားဆိုငျတှကေ … မို့မောကျကာ … တငျးတငျးလေး ရုနျးထနသေညျ … မောငျလေ … ကြှနျမကို … မွငျတာနဲ့ … အတငျးဖကျနမျးတော့တာပဲရှငျ … “အို … မောငျ … မနမျးနဲ့ကှာ …” “အို … ဟငျ့ … ပွောလို့လဲ မရဘူး …” မောငျလေ … ကြှနျမကိုယျလေးကို … အတငျးဖကျထားပွီး … မကျြနှာတဈခုလုံးကို … လြှောကျနမျးတော့တာပါပဲရှငျ … ရှကျလှနျးလို့သာ … ရုနျးကနျနတော … ကြှနျမ ငွငျးဟနျလေးက … အားမရပါဘူး … မနကျက … မောငျ့အနမျးတှကေို … တမျးတနမေိတော့ … မရုနျးမိပါဘူး … မောငျလေ … ကြှနျမကို … နမျးနရေငျးနဲ့ … မှယေ့ာလေးပျေါကို … နှဈယောကျသား … လဲကသြှားပါတော့တယျ … မောငျ့အနမျးတှကေ … မကျြနှာတဈခုလုံး လြှောကျနမျး နသေလို … ကြှနျမရဲ့ ရငျခုနျသံတှကေလညျး … မွနျလာပါတယျ …
အို … မောငျရယျ … ကြှနျမရဲ့ နှုတျခမျးလေးတှကေို … လာနမျးတဲ့ … မောငျ့အနမျးတှကေ … ပူနှေးလှနျးပါတယျ … ကြှနျမ နှုတျခမျးအိအိလေးတှကေို … မောငျ စုပျယူသှားတော့လေ … ကြှနျမရငျထဲမှာ ဗွောငျးဆနျသှားတာပဲရှငျ … အို … မောငျရယျ … မောငျ့ရဲ့ လြှာလေးက … ကြှနျမ နှုတျခမျးကွားထဲ တိုးဝငျ လာပွနျပွီ … အို … အို … မောငျနျော … ဟငျ့ … ကြှနျမလြှာလေးကို … မောငျ စုပျယူသှားလိုကျတာ … ကြှနျမ ရငျထဲက အသဲတှပေါ … ပါသှားမတတျပါပဲရှငျ … မောငျ့ရဲ့ အနမျးတှကေ … ခြိုမွိနျလှနျးတော့ … မကျြစိလေး စငျးပွီး … မောငျ့ကို … တငျးတငျးဖကျထားရငျး … မောငျခဈြသမြှ ကြှနျမလိုကျလြောလိုကျပါ တယျ … ဟငျး … အနမျးတှကေ … ငါးမိနဈလောကျကွာတယျ ထငျတယျ … မောငျနဲ့ … ကြှနျမ … ခဏလေး နမျးတာရပျသှားတော့ … သကျပွငျးလေးခိုးခမြိ ပါတယျ … မောငျရယျ … ခဈြခငျြသလိုသာ ခဈြပါတော့ … မောငျရယျ … ကြှနျမရငျထဲမှာလေ … မောငျခဈြသမြှကို … လိုကျလြောခငျြနတေဲ့ … ဆန်ဒအပွညျ့ ပါပဲကှယျ …
“အရမျးခဈြတယျ … မ ရယျ …” “ခဈြတာပေါ့ … မောငျရယျ … ခဈြတာပေါ့ …” “မ … ကြှနျတျော … မ ကို … အရမျးခဈြလို့ ရပွီလားဟငျ …” “အို …” ကြှနျမလေ … မောငျ့အမေးကို … မဖွနေိုငျအောငျ … ရှကျရှံ့သှားပါတယျ … မောငျ တျောတျောဆိုးတယျရှငျ … အပြိုစငျလေးကို … ဒါမြိုးမေးစရာလားလို့ … ခဈြလှနျးလို့ … လကျထပျလိုကျတာပေါ့ … မောငျ ပွုသမြှ … နုမယျ့ … တို့ပါကှယျ … ကြှနျမလေ … ရှကျလှနျးလို့ … မောငျ့မကျြနှာကို မကွညျ့ရဲတော့ဘူး … ခေါငျးလေး စောငျးကာ … မကျြစိလေးကို မှိတျပွီး … ဆကျခဈြလာမယျ့ … မောငျ့အနမျးတှကေို … စောငျ့နလေိုကျပါတယျ … ဆိတျဆိတျနခွေငျးသညျ … ဝနျခံခွငျးလို့ … မောငျမှတျယူလိုကျတယျ ထငျပါတယျ … ခေါငျးလေးစောငျးသှားတဲ့ … ကြှနျမရဲ့ လညျတိုငျဝငျးဝငျးလေးကို … နမျးပါတယျ … အို … မောငျ ရယျ … ဘယျလိုမြား နမျးလိုကျတာလဲဟငျ … ကြှနျမ ကွကျသီးတှေ တဖွနျးဖွနျးထသှားပါတယျ … မောငျလေ … အနမျးတှကေ .. တဖွေးဖွေး အောကျဆငျး လာပါတယျ … အို … မကျြနှာသုတျပဝါလေးက … တငျးတငျးစီးထားတော့ … ရငျနှဈမှာက … မို့မောကျနပေါတယျ … မောငျ … ကြှနျမရဲ့ … ရငျနှဈမှာကွားကို … စနမျးပါတယျ … အို … ရှငျ … သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးနလောတဲ့ … ကြှနျမရဲ့ … ရှရေငျမို့မို့လေးက … မောငျ့အနမျးတှကွေောငျ့ … ပိုပွီး ကော့လာပါတယျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့ခေါငျးကို … တှနျးဖယျလိုကျခငျြပမေယျ့ … မတှနျးဖယျရကျပါဘူး … ဆှဲအားတဈခုက … မောငျဆကျနမျးဖို့ … တှနျးအားပေးနပေါတယျ …
“မ … မောငျ … ဖွညျလိုကျတော့မယျနျော …” “အို … ဟငျ့” မောငျပေါ့ … ကြှနျမရဲ့ … အဖွတေောငျ မစောငျ့တော့ဘူး … မကျြနှာသုတျပဝါလေးကို … ဖွညျ လိုကျပါတယျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့လကျကလေးကို … အမွနျဖမျးပွီး … “မောငျက … တို့ကို … တကယျခဈြတာပါနျော …” “မေးနစေရာလိုသေးလား … မ ရယျ … ခဈြတာပေါ့ … အရမျးခဈြတာပေါ့ …” “တို့လညျး … မောငျ့ကို … အရမျးခဈြတယျကှယျ … မောငျ … တို့ကို … ပဈမသှားရဘူးနျော” “ပဈသှားစရာ လား … မ ရယျ … ဒီလောကျခဈြတဲ့ဟာကို …” “အငျးပါ … မောငျရယျ … တို့ ယုံပါတယျ …” ကြှနျမလေ … မောငျ ဆကျနမျးဖို့ … လိုကျလြောလိုကျပါတယျ … သိပျခဈြရတဲ့ ခဈြဦးသူ … နမျးခငျြသလိုသာ နမျးပါစတေော့ … မောငျပြျောရငျ … ကြှနျမပြျောတာမို့ … မောငျလိုခငျြတာ … ဖွညျ့ဆညျးပေးခငျြပါတယျ … ကြှနျမလေ … မကျြစိလေး မှိတျပွီး … ရငျနှဈမှာကို … မောငျနမျးမယျ့ အနမျးတှကေို … ရငျခုနျစှာနဲ့ … စောငျ့နလေိုကျပါတယျ … မကျြနှာသုတျပဝါလေးက … လှပျခနဲ ဖွဈသှားပွီး … ကြှနျမရဲ့ … အလှတရားတှေ … ပျေါလာပါတယျ … ဖွူဝငျးတဲ့ … ရငျနှဈမှာက … အလုံးတူ ဝိုငျးစကျနပွေီး … အလယျမှာ … ပတ်တမွား ခဲလေးက … တငျတယျဆိုရုံလေးတငျထားတာပါ … ကြှနျမရဲ့ … ရငျအလှကို ကွညျ့ပွီး … မောငျမနနေိုငျတော့ပါဘူးရှငျ …
“လှလိုကျတာ … မ ရယျ … အရမျးလှတယျ …” “အို … မောငျရယျ …” မောငျ … ကြှနျမ ရငျသားတှကေို … မကျမကျမောမောနဲ့ … ကွညျ့ပွီး … အရမျးကို သဘောတှကေနြပေါတယျရှငျ … “မောငျရယျ … အဲဒီလိုမြိုးကွီး … စိုကျမကွညျ့နဲ့လကှော … အရမျးရှကျပါတယျဆိုနမှေ … ဟငျ့” “လကျတှေ မကာနဲ့လေ … မရယျ … ဖွေးဖွေးလေး ကိုငျမယျနျော …” ကြှနျမ ကာထားတဲ့ … လကျလေးတှကေို … ဆှဲဖယျလိုကျတယျ … ရှကျတာရယျ … ကွောကျတာရယျကွောငျ့ … မဖယျပေးရဲပါဘူး … မောငျလေ … ကြှနျမ လကျကလေးကို နမျးလိုကျတယျ … “ဖယျပေးပါနျော … မရယျ … မောငျကိုငျခငျြလို့ပါ …” “အို … မောငျရယျ … ကြှနျမလေ … မကျြစိလေး မှိတျပွီး … ကြှနျမလကျကို ဖယျပေးလိုကျပါတယျ … သိပျခဈြလှနျးတဲ့ မောငျ့ကို … လိုကျလြောရမှာပေါ့ရှငျ … မောငျ … ကြှနျမ ရငျသားအိအိလေးကို … ဖှဖှလေး လာကိုငျပါတယျ … ကြှနျမလေ … တှနျ့ကနဲ ဖွဈသှားတယျ … အသဲယားလိုကျတာရှငျ … မောငျ … ကြှနျမရငျတှေ ကို … ခွမှေပဈမှာလားဟငျ … “မောငျ … ဖွေးဖွေးနျော …”
“အငျးပါ … မရယျ … မရငျသားတှကေ … သဈတျောသီးလောကျရှိတယျနျော …” “အို … မောငျနျော … မပွောနဲ့ကှာ … တို့ နားရှကျတယျ” “တငျးနတောပဲနျော …” “ဟိတျ … မောငျ … ပွောလဆေိုးလပေါလား” “မောငျ … ညှဈခငျြတယျကှာ …” “ဟငျ့အငျး … နျော” မောငျလေ … ကြှနျမရငျသားတှကေို … ဖှဖှလေး နယျပဈလိုကျတယျ … ကြှနျမ … အသှေးအသားတှေ ဗွောငျးဆနျသှားတာပဲရှငျ … “အို … ဟငျ့ …” ရငျနှဈမှာကို … မောငျ စိတျကွိုကျ … ကိုငျတော့လေ … ကြှနျမ … ရငျတှေ ပူလာပါတယျ … ကွကျသီးတှကေ တဖွနျးဖွနျးထလို့ … တကိုယျ လုံးလညျး … ထှနျ့ထှနျ့လူးနတောပဲ … မောငျလေ … ကြှနျမ … ရငျနှဈမှာကို … နမျးတော့တာပဲရှငျ … မောငျ့ရဲ့ မှတျသိပျတဲ့ အနမျးတှကွေောငျ့ … ကြှနျမ ရငျ တှေ … အရမျးခုနျပွီး … ရငျထဲမှာ လှိုကျခနဲ လှိုကျခနဲ ဖွဈဖွဈသှားပါတယျ … အို … မောငျရယျ … မောငျလေ … ကြှနျမ … ရငျသားထိပျဖြား သေးသေးလေး ကို … အတငျးစုပျတော့ … ကြှနျမ … နှုတျခမျးလေးက … မမြိုသိပျနိုငျတော့ဘူးရှငျ့ … “အို … ဟငျ့ …” မောငျလေ … ကြှနျမ ရငျသားတဈဖကျကို နမျးတယျ … တဈဖကျကလညျး … ဆော့ကစားတယျ … သိပျဆိုးတယျ မောငျရယျ … အို … ဖွေးဖွေး စို့ပါကှယျ … တို့ … မောတယျကှာ … မနတေတျဘူးကှယျ … မောငျ ကြှနျမ ရငျသားကို … ဖှဖှလေး နယျနရေငျး … ထိပျဖြားလေးကို … လကျမနဲ့ လကျညှိုး … ညှပျပွီး .. ခလြေိုကျပါတယျ … အစလေ့ေးက … သေးသေးလေးမို့ … မောငျကိုငျရခကျနပေါတယျ … မောငျလေ … မရမက … အတငျးညှဈပါတယျ …
“အ … မောငျ … အရမျးမညှဈနဲ့ကှာ … တို့ … မနတေတျဘူး .. အရမျးယားတယျကှာ … အို … ဟငျ့ …” “ဟငျ့ … မောငျကှာ … အာ … ရှီး … ဟငျ့ … ကြှတျ … ကြှတျ … ရှီးး … “ ကြှနျမ ဗိုကျထဲက … ကလီစာတှေ ဗွောငျးဆနျကုနျပွီလား မသိပါဘူးရှငျ … အတငျး နမျးနတေဲ့ … မောငျ့ခေါငျးကို … တှနျးဖယျရမယျ့ အစား … ကြှနျမလကျတှကေ … မောငျ့ဆံပငျတှကွေားထဲ … ထိုးထညျ့ပွီး … အတငျးဖိပေးနပေါတယျ … အောကျက ရငျနှဈမှာကလညျး … ကော့ကော့ပေး နပေါတယျ … ဘာတှေ ဖွဈကုနျပွီလဲဟငျ … ကြှနျမ တကိုယျလုံး ထိနျးခြုပျလို့မရတော့အောငျ … မောငျ့ကို ခဈြမိသှားတာလား မသိတော့ပါဘူးရှငျ …
“မောငျ … ရယျ … တျောပါတော့နျော … တို့ ရငျတှေ အရမျးမောနပွေီ …” မောငျလေ … ကြှနျမကို … စကားတောငျ ပွနျမထူးတော့ဘူး … အဆော့မကျတဲ့ ကလေးလိုပဲ … အရုပျသဈလေးရတော့ … ထမငျးမေ့ ဟငျးမဖွေ့ဈနပွေီ … နူးအိတဲ့ ကြှနျမရဲ့ ရငျနှဈမှာက … မောငျ့အနမျးတှေ … မောငျ့အဆုပျအညှဈလေး တှေ … မောငျ့ဝငျသကျထှကျသကျလကွေောငျ့ … အရမျးကို … တငျးပွီး … ကွှတကျမို့မောကျနပေါတယျ … မောငျလေ … ကြှနျမ ရငျသားတှကေို … နမျးနေ ရငျးက … အနမျးတှကေ … အောကျကို ရှလေ့ာပါတယျ … ကြှနျမဗိုကျလေးကို နမျးတယျ … ခကျြကလေးနားရောကျတော့ … လြှာလေးနဲ့ ကလိပါတယျ …
“အို … မောငျ့ … “ မောငျ့အနမျးတှကေ … ကြှနျမ ဗိုကျလေးကို … လှိုငျးထစပေါတယျ … ခကျြနားကလေ … အောကျကိုရှတေ့ော့လေ … ကြှနျမ … ရှကျလိုကျ တာရှငျ … မောငျ့ကိုလေ … ဘယျလောကျခဈြတယျပွောပွော … အပြိုစငျလေးမို့ … အရမျးရှကျမိပါတယျ မောငျရယျ … တသကျလုံး … လုံလုံခွုံခွုံ ထိနျးသိမျးလာတဲ့ … ကြှနျမရဲ့ ရတနာရှကွေုပျလေးက … ပေါငျနှဈခြောငျးကွားမှာ … ဖောငျးကားနပေါတယျ … အို … ဟငျ့ … မောငျ … ကြှနျမ ပနျးလေးကို … ကွညျ့နတောပေါ့လေ … ကြှနျမ ပေါငျလေး နှဈဖကျကို … လိမျကဈြပွီး … နောကျဆုံး ခံတပျကို … ကာကှယျနပေါတယျ … မောငျလေ … ကြှနျမပေါငျလေး ကို … ဖွဲကွညျ့တယျ … မရဘူး … မောငျရယျ … တို့ … အရမျးရှကျတယျ … အရမျးကွောကျတယျကှာ … မောငျလေ … ဆီးခုံမို့မို့လေးပျေါက … အမှေးလေး တှကေို … မွငျသှားပွီပေါ့ … မောငျ … အမှေးလေးတှကေို … နမျးလိုကျပါတယျ … မွတျမွတျနိုးနိုးပေါ့ရှငျ … မောငျက … စိတျရှညျပါတယျ … ကြှနျမ ကွောကျနတောသိနတေော့ … ပေါငျလေးကို … နမျးတယျ … ခွသေလုံးလေးကို … နမျးတယျ … ခွဖေမိုးလေးကို နမျးတယျ …
“မောငျ … နျော … ခွထေောကျတှေ လြှောကျမနမျးနဲ့ကှာ … မောငျ ဘုနျးနိမျ့လိမျ့မယျ … ဟိတျ … အာ” “မောငျ … ရယျ …” မောငျရယျလို့ပဲ … ကြှနျမ ပွော နိုငျပါတော့တယျ … ကြှနျမ ခွမေလေးကို … မောငျပေါ့ … သူ့ပါးစပျထဲ ထညျ့ပွီး … စုပျနပေါတယျ … ကြှနျမလေ … ကြှနျမ … မောငျ့ကို … အရမျးခဈြသှား တယျ … မောငျ့ရဲ့ အပွုအစုတှကွေောငျ့ … ကြှနျမ ကွှသှေားပွီကှယျ … ကဲ … မောငျရယျ … မောငျ ဆှတျခူးခငျြတဲ့ … တို့ရဲ့ အပြိုစငျပနျးလေးကို … ယူပါ တော့ … ကြှနျမလေ … လိမျကဈြနတေဲ့ … ပေါငျလေး နှဈခြောငျးကို … ဖွပေေးလိုကျတယျ … ဆှတျခူးလိုကျပါ … မောငျရယျ … ဆှတျခူးလိုကျပါ … ကြှနျမ ပေါငျနှဈခြောငျး … အားလြော့သှားတာ … မောငျသိတယျ … လူပါးလေး မောငျက … အနမျးတှေ ပေးရငျး အပျေါပွနျတကျလာတယျ … ကြှနျမလေ … အသဲ ယားလှနျးလို့ … မကျြစိလေး မှိတျထားလိုကျပါတယျ … မောငျလေ … ပေါငျကွားထဲ … မကျြနှာ … ဘယျလို ရောကျသှားလဲ မသိပါဘူး … ကြှနျမက … ဟ ပေးလိုကျတာလား … မောငျက … ဖွဲပွီး ဝငျလာတား … “လှလိုကျတာ မ … ရယျ … အရမျးလှတာပဲ …”
“အို … မောငျနျော …” ကြှနျမ … ရှကွေုပျလေးကို … မောငျ … တို့ကွညျ့တယျ … ထိကွညျ့တယျ … အမှေးနုနုလေးတှေ … သဘောကလြှနျးလို့ … နမျးတယျ … ဖောငျးဖောငျးမို့မို့ … ကြှနျမ ပနျးလေးကို … နမျးတယျ … အရမျးရှကျပမေယျ့ … မောငျ့ကို မတားနိုငျတော့ပါဘူး … မောငျ့ကို တားမယျ့ … နှုတျခမျး လေးက … အားစေးထညျ့သလို … နှုတျပိတျနပေါတယျ … မောငျလုပျခငျြတာသာ လုပျပါတော့ … မောငျရယျ … မောငျလေ … ကြှနျမ … အတှငျးခံလေးကို … ဘေးကပျလိုကျတယျ … ပနျးလေးပျေါက … အတှငျးခံလေးက … ဘေးကပျသှားပွီး … ကြှနျမ ပနျးလေးကို … ဖွဲကွညျ့တယျ … ရှကျလိုကျတာ မောငျရယျ … ရှကျလိုကျတာ … ကြှနျမလေ … ကြှနျမ … မကျြစိကို မှိတျပွီး … ခေါငျးအုံး အဖြားလေးကို … ကဈြကဈြပါအောငျ … ဆှဲထားရငျး … အရှကျဖွနေရေ တယျ … “မ … အဖုတျလေးက … အရမျးလှတယျကှာ …” “အို … မောငျနျော ဟငျ့ … မကွညျ့နဲ့တော့ကှာ … အရမျးရှကျလာပွီ …” “သုံးရောငျခွယျလေးနျော … မောငျနမျးခငျြတယျကှာ …” ရှကျလိုကျတာမောငျရယျ … ဘာသုံးရောငျခွယျလဲ … မသိပါဘူး … ကြှနျမ ဒီအရှယျထိ … ကိုယျ့ဟာကိုယျ သခြောမ ကွညျ့ဖူးတော့ … မောငျ ဘာပွောမှနျးနားမလညျပါဘူး …
“အာ … ဟအေ့ေး … နမျးရဘူးနျော … မောငျ …” “ဟာ …. အား … အား … အား … “ မောငျလေ … ကြှနျမရဲ့ … ပနျးလေး အဝကို နမျးလိုကျပါတယျ … မရှံ ဘူးလား မောငျရယျ … မောငျ့ကိုလေ … မတားဆီးနိုငျတော့ဘူး … အထိအတှကေ့ … အရမျးခံရတယျ မောငျရယျ … မောငျ့ရဲ့ လြှာဖြားလေးနဲ့ … ကြှနျမ … ပနျးလေးနုနုကို … ထိလိုကျတာ … အရမျးကောငျးတာပဲရှငျ … ရငျထဲမှာ … ဗုံးပေါကျသလိုပဲ … ဝုနျးကနဲ … သှေးတှေ ဆူကွှလာပါတယျ … အို … မောငျရယျ … ဟငျ့ … “အား … အား … အား … ရှီး … “ ကြှနျမ ရူးပွီ … မောငျရယျ … အသှေးအသားတှကေ … ပှကျပှကျဆူလောကျအောငျ … မောငျနမျးတတျတယျ ကှယျ … မောငျ့ရဲ့ အနမျးတှအေောကျမှာ … ကြှနျမလေ … ဘယျလိုနရေမလဲမသိတော့ပါဘူးရှငျ … ကောငျးလှနျးတော့ ခံရခကျတယျ ဆိုတာမြိုးပေါ့ … မောငျ … ရငျသားလေးတှကေို နမျးတုနျးကနဲ့ … ဘာမှမဆိုငျတော့ဘူးရှငျ … အထိအတှကေ့ … ကြှနျမကိုလေ … ဟိုးမိုးကောငျးကငျဆီ … ချေါသှားပါတယျ …
အေးကနဲ သိမျ့ကနဲ … မွငျ့လိုကျ နိမျ့လိုကျနဲ့ … ရငျတုနျလှနျးလို့ … ကြှနျမ အောကျနှုတျခမျးလေးကို … အတငျးဖိကိုကျထားပွီး … မောငျ့အနမျးတှကေို … ခံ နရေရှာတယျ … နမျးပါမောငျရယျ … နမျးပါ … သိပျခဈြရလှနျးတဲ့ … ခဈြဦးသူ မောငျ့ကို … အရာရာပေးဆပျထားပါတယျ … မောငျလိုခငျြတာ ယူပါလေ … မောငျလေ … ကြှနျမ ပနျးလေးထဲက … ပနျးနုရောငျ ပနျးဖတျလေး နှဈဖတျကို … လြှာနဲ့ယကျလိုကျတယျ … အာ … ဟာ … ကောငျးလိုကျတာ မောငျရယျ … ကောငျးလိုကျတာ … နူးညံ့တဲ့ ပနျးဖတျလေးတှကေို … မောငျ့လြှာကွမျးကွမျးနဲ့ … ယကျပေးတော့ … ကြှနျမလေ … ကြှနျမ … ရမကျတှေ ထနျကုနျတာပေါ့ … ဟိုးအရငျတုနျးက … အပြိုလေးဆိုတော့ … ကာမအရသာဆိုတာ ဘယျသိပါ့မလဲရှငျ … မောငျနဲ့ လကျထပျမှ … မောငျ့အနမျးတှအေောကျမှာ … ဒီအရသာ ကို … စသိလာပါတယျ … ကာမဆန်ဒက … ပွောမပွတတျအောငျ … ထကွှနလေို့ … ကြှနျမလေ … မရှကျနိုငျတော့ပါဘူး … အတငျးပဲ … ပနျးလေးကို ကော့ ကော့ပဈလိုကျတယျ … ကြှနျမတငျလေးတှေ … မှယေ့ာကနေ လှတျသှားလောကျအောငျ … ကော့ပဈလိုကျတာ … မောငျ နမျးတာ အရမျးကောငျးလို့ရှငျ့ … ရှကျပမေယျ့ မနနေိုငျတော့ … မောငျရယျ … ပနျးလေးထဲက … ယားလိုကျတာမှ … အရမျးပဲ … အထဲကနေ … မောငျ့လြှာလေးမြား … တိုးဝငျလာမလား … အတငျး ဖမျးပွီး စုပျနတော … ရှကျလိုကျတာကှယျ … မောငျရယျ …
“အို … အား … အား …” နမျးတတျလိုကျတာ မောငျရယျ … နမျးတတျလိုကျတာ … ကြှနျမရဲ့ … ငွီးသံတှကေ … ထိနျးမရအောငျ … ထှကျနပေါတယျ … အောကျနှုတျခမျးလေးကို … အတငျးဖိကွိတျထားပွီး … မောငျပေးတဲ့ခဈြအရသာက … ကောငျးလှနျးတော့ … ဖငျလေးကို … ကော့လိုကျ … စကောဝိုငျးလို … ဝကေ့နဲ … ကော့လိုကျနဲ့ … မောငျ့အနမျးအောကျက … လှတျလမေလား … ရုနျးကွညျ့မိပါတယျ … မောငျကလညျး မောငျပဲလေ … ကြှနျမ အပျေါကို ကော့ ပေးရငျ … မောငျ့လြှာလေးက … အပျေါကို လိုကျလာပါတယျ … အောကျကိုကသြှားရငျ … အောကျကို လိုကျလာတယျ … ဘယျကိုဝိုကျရငျလညျး … ပါလာ တာပဲ … ကျောနဲ့မြား ကပျထားသလား မောငျရယျ … ခှာမရတော့ဘူး … “အို … ဟငျ့ … ဟငျ့ … အရမျးထိတယျ မောငျရယျ … တို့ မခံနိုငျဘူး … အား ရှီး … အား … အား … ရှီး” မောငျလေ … ကြှနျမ ရတာဖူးလေးကို ဘယျလိုမြားတှသှေ့ားလဲမသိပါဘူး … အစသေ့ေးသေးလေးကို … အတငျးပဲ ဖိပွီးယကျတယျ … “ဟငျ့အငျးကှယျ … အို … ရှီး … မခံနိုငျတော့ဘူး … မခံနိုငျတော့ဘူး … တျောပါတော့ မောငျရယျ … အိုး … ဟာ … ဟာ” ကြှနျမ ခံရခကျမှနျးသိလေ … မောငျ ပိုနမျးလပေဲ … တားလို့လညျး မရတော့ဘူးလေ … “အို … မောငျ … တျော … တျောပွီနျော … တို့ … သေးထှကျတော့မယျ …” “ဟိတျ …. ဖယျပါကှာ … ဟငျ့ … ဟငျ့ …” ကြှနျမ ပနျးလေးထဲကလေ … ဘယျလိုမှ မခံနိုငျတော့ … ယားလှနျးလို့ သေးထှကျခငျြသလို … ဖွဈလာပါတယျ … မောငျရယျ … ဖယျလိုကျပါ ကှာ … တျောကွာ … ရှူးရှူးတှေ ထှကျကကြုနျမှ … မောငျ့မကျြနှာတှေ ပကေုနျအုံးမယျ …
“မောငျရေ … အား … အား … အား … မရတော့ဘူး … တို့ … မ ထိနျးနိုငျတော့ဘူး … ရှူရှူးတှေ … ထှကျကုနျပွီ … ထှကျကုနျပွီ … ဟငျ့ … ဟငျ့ … ဟငျ့ “ ကြှနျမစိတျတှေ … ထိနျးမရအောငျ … ဟိုးအဝေးကွီးကို ပြံတကျ သှားပါတယျ … ထိပျဆုံးလညျးရောကျရော … ဝုနျးကနဲ … ပွုတျကလြာတာ … ရငျထဲ အေးကနဲ … ဖွဈသှားတာပဲရှငျ … ကောငျးလိုကျတာ … သှေးကွော လေးတှကေ … တဆဈဆဈယားနတေဲ့ … ဝဒေနာလေး … တစိမျ့စိမျ့နဲ့ … ပြောကျသှားတာ … သိပျကောငျးတာပဲမောငျရယျ … မောငျ ပေးတဲ့ ခဈြအရသာက … တျောတျောကောငျးတာပဲရှငျ … သိပျခဈြသှားပွီ … မောငျရယျ … သိပျခဈြသှားပွီ … “ဟငျ့ … မောငျ အရမျးဆိုးတယျကှာ …” “အရမျးကောငျးတယျမှတျ လားဟငျ …” “သိဘူးကှာ … ရငျထဲမှာ … အရမျးမောနတောပဲ သိတယျ …” ဟုတျပါတယျရှငျ … မောငျ့ရဲ့ အနမျးတှကွေောငျ့ … ကြှနျမ … ရငျတှေ တလှပျလှပျဖွဈနပွေီး … တကိုယျလုံး ရှိသမြှအားတှကေို … မောငျ စုပျယူသှားပါတယျ … သိပျဆိုးတာပဲ မောငျရယျ … မောငျလေ … ကြှနျမ ပနျးလေးထဲက … အရညျတှကေို … အတငျးပဲ စုပျယူပွီး … မြိုခလြိုကျတယျ … မောငျ့လြှာကွီးနဲ့ … အတငျးပိတျထားပွီး … အရညျတှကေို … အကုနျယကျပဈလိုကျပါတယျ … “မောငျရယျ … မရှံဘူးလားဟငျ …” “မောငျ … သိပျခဈြတာ ယုံပွီလား … မ ကို ခဈြလှနျးလို့ … မ အရညျတှကေို … မရှံပါဘူး … ခြိုတောငျ ခြိုသေးတယျ …” “ဟငျ့ … မောငျရယျ … အရမျးအားနာတာပဲ … ဘာလို့ အကုနျစုပျပဈလိုကျတာလဲ … မောငျ အကုနျစုပျပဈလိုကျတာ … အားတောငျမရှိတော့ဘူး … မောငျ ရယျ … တို့ကို … ဖကျထားပါလားဟငျ …”
“မောငျ့ကို ခဈြတယျမှတျလားဟငျ …” “သိပျခဈြတာပေါ့ … မောငျရယျ … သိပျခဈြတာပေါ့ …” “မောငျ့ကို ခဈြတယျဆိုရငျ … မောငျ အရမျးခဈြခငျြလာပွီကှာ … ဟိုဟာလေးကို ခြှတျလိုကျတော့နျော …” “ခဏလေးပါ မောငျရယျ … တို့ အားမရှိလို့ … ခဏလေး … မှေးနတေယျ …” “အငျး …” မောငျ … ကြှနျမ နှဖူးလေးကို … နမျးလိုကျပွီး … အတှငျးခံလေးကို … ခြှတျလိုကျသညျ … “အို … မောငျနျော … ဟငျ့” ကြှနျမ လေ … ရှကျလှနျးလို့ … အတှငျးခံလေးကို … လိုကျဆှဲနမေိပါတယျရှငျ … ရှကျလိုကျတာ အရမျးပေါ့ … အပြိုလေးဆိုတော့ … မရဲဘူးရှငျ့ … မောငျကို့ သိပျ ခဈြပမေယျ့ … တကယျတမျး … လိုကျလြောဖို့ကတြော့ … နှမွောနမေိသညျ … ကြှနျမရဲ့ … အပြိုစငျပနျးဦးလေးကို … မောငျ့ကို … ခူးခှငျ့ပေးလိုကျပမေယျ့ … ရှကျလိုကျတာရှငျ … မောငျလေ … အားမရှိတဲ့ … တို့ကို … အနိုငျကငျြ့တယျ … အတှငျးခံလေးက … ပေါငျလေးတဈလြှောကျ … လိပျပွီး … ကြှတျသှား တယျ … “အရမျး … ခဈြတယျ … မရယျ … အရမျးခဈြတယျ …” မောငျလေ … ကြှနျမ မကျြနှာကို … အတငျးနမျးတော့တာပဲရှငျ … လညျတိုငျလေးကို … နမျး တော့ … ယားလှနျးလို့ … အောကျက … ဟောငျးလောငျး ဖွဈနတော … မသှေ့ားတယျ … မောငျလေ … သူ့အကငြ်္ီတှလေညျး ခြှတျပဈလိုကျတယျ … မောငျ ဘောငျးဘီကိုခြှတျတော့ … ကြှနျမ … မကျြစိမှိတျထားလိုကျတယျ … မောငျ့ရဲ့ ဟိုဟာကို … မကွညျ့ရဲဘူးရှငျ့ … ရှကျလိုကျတာရှငျ … ယောကျြားလေးတဈ ယောကျနဲ့ တဈခါမှ … မနဖေူးပမေယျ့ …
ဖိုမကိစ်စတှကေိုတော့ … ကြှနျမ … သိတနျသလောကျ သိထားပါတယျ … မောငျ့ရဲ့ … ပေါငျကွားထဲက ပစ်စညျးနဲ့ … ကြှနျမ ပနျးလေးထဲကို … ထညျ့လိုကျရငျ … အို ဆနျ့ပါ့မလားရှငျ … တျောကွာ မဆနျ့လို့ … ကှဲပွဲသှားမှရှငျ့ … မသိတော့ပါဘူးရှငျ … မောငျခဈြသမြှ … လိုကျလြောလိုကျတော့မယျ … ဟငျ့ … “အို အို …” မောငျလေ … ကြှနျမပေါငျကို ကားလိုကျပါတယျ … ရှကျလိုကျတာ … မောငျရယျ … ပေါငျလေးကို … အတငျး ပွနျစိတယျ … မောငျက ပွနျကားတယျ … ကြှနျမက ပွနျစိတယျ … ဒီလိုကားလိုကျ … စိလိုကျနဲ့ … ကြှနျမရငျတှေ တုနျလိုကျတာရှငျ … နောကျဆုံးတော့ … မောငျ့ကို အရှုံးပေးလိုကျပါတယျ … မောငျလေ … ကြှနျမကို … ကွညျ့တဲ့အကွညျ့တှကေ … အရမျးကို … ရမကျထနျနပေါတယျ … သားကောငျကို စားခါနီးကွညျ့တဲ့ … ကြားတဈကောငျရဲ့ အကွညျ့မြိုးဆို … ပိုမှနျပါလိမျ့မယျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့မကျြလုံးတှကေို … ကွညျ့ပွီး … ကွောကျလာပါတယျ … သူကတော့ … ပြျောနမှောပေါ့ … ကြှနျမကတော့ ကွောကျနပေါတယျ … မောငျ သူ့အကငြ်္ီတှကေို … ခြှတျလိုကျပါတယျ … မောငျ့ရဲ့ ဗလတောငျ့တောငျ့ ရငျခှငျကယျြကွီးက … ကြှနျမကို လှနျ့နတောလားဟငျ … မောငျ့ရဲ့ဗိုကျမှာ … ဗယျလီတုံးလေးတှကေ အစီအရီ … ဟငျ့ … ကွောကျလာပွီမောငျရယျ … ကြှနျမလေ … ဆကျမကွညျ့ရဲတော့ဘူး … မောငျ ဘောငျးဘီဇဈကို ကိုငျလိုကျတော့ … မကျြစိလေးမှိတျပဈလိုကျတယျ … ဒါပမေယျ့ … နားထဲမှာ ကွားလိုကျတာက … ဇဈဖွုတျတဲ့အသံလေး … ဇှိကနဲ ကွားလိုကျရတာ … ရငျတုနျသှားတယျ … ဟငျ့ ဟငျ့ … ကြှနျမရဲ့ အပြိုစငျဘဝလေး … အဆုံးသတျမယျ့အခြိနျကို နီးလာပွီပေါ့ …
“မ … ကွောကျနတောလားဟငျ “ “အို …” ကြှနျမလေ … ဘာအသံမထှကျရဲဘူး … “မကွောကျနဲ့နျော … မ … မနာပါဘူး မရယျ …” “ဟငျ့ … ဟာ …. ဟာ … ရှီး” အိုး … မောငျလေ … သူ့ပစ်စညျးကွီးနဲ့ … ကြှနျမပနျးလေးကို လာထိတယျ … ကြှနျမ တကိုယျလုံး တုနျသှားတာပဲရှငျ … မောငျ့ရဲ့ ထိပျဖြားက … နူးညံ့ပါ တယျ … ဒါပမေယျ့ မာတယျ … မောငျလေ … အရမျးနူးညံ့တဲ့ ပနျးလေးအဝကို တလေို့ကျပါတယျ … “ဟာ … ဟငျ့” အထိအတှကေ့ မပွောပွတတျအောငျပဲ ရှငျ … ကြှနျမလေ … ရှကျလညျးရှကျ … ကွောကျလညျး ကွောကျတော့ … ကြှနျမပနျးလေးကို … အတငျးညှဈထားလိုကျပါတယျ … မောငျလေ … တသေ့ာ တထေ့ားတယျ … သှငျးမရဘူးရှငျ့ … မောငျ … က စိတျကွီးတယျ ထငျတယျ … အတငျးပဲ … ဟိုထိုး … ဒီထိုးလုပျတယျ … “အို … မောငျနျော … ဟငျ့အငျး ကှာ … ဟငျ့အငျး …” “အို … မောငျ … မောငျ့ …” မောငျလေ … ကြှနျမပနျးလေးကို … ထိုးလို့လညျးမရတော့ … အပျေါအောကျ … လြှောကျပှတျတယျရှငျ့ … ခံရခကျလိုကျတာရှငျ … အို … ဟငျ့ … ကြှနျမ ပနျးဖူးလေးကို … မောငျ့ပစ်စညျးကွီးနဲ့ … လာလာထိတယျ … အား … ခံရခကျလိုကျတာရှငျ … ပနျးလေးက အ ထညျ့သာမခံတာ … အထဲမှာ … အတငျးညှဈညှဈနပွေီး … ပနျးဝတျရညျတှကေ … တစိမျ့စိမျ့ ယိုကနြပေါတယျ … ပနျးလေးထဲကလညျး … အရမျးယားလာ ပါတယျ … ခဈြခငျြလညျး … ခဈြလိုကျပါတော့ မောငျရယျ … ကြှနျမလေ … ပေါငျလေးကို … ပိုပွီး ကားပေးလိုကျတယျ … မောငျလေ … နညျးနညျးလေး ဟ ပေးတာနဲ့ … အတငျးပဲ … ထိုးထညျ့တယျ … “အား … နာတယျ … မောငျရယျ … နာတယျ…” ပွှတျကနဲ … မောငျ့ထိပျဖြားလေး … ဝငျလာပါတယျ … ကွီး လိုကျတာရှငျ … ပနျးလေးက ကဉျြးတော့ … နာတယျရှငျ့ … “ဟား … မရယျ … ဝငျသှားပွီ … ဝငျသှားပွီ” မောငျရဲ့ … နှဈထောငျးအားရသံက … နှဈကိုယျကွားပွောတာဆိုတော့ …
ကြှနျမကို … ပိုပွီး ရမကျထနျစပေါတယျ … “အား … မောငျ … မောငျ … ပွနျထုတျကှာ … ထပျမထညျ့နဲ့တော့ … ဟငျ့ … နာတယျ … နာတယျ … ဟီး” မောငျလေ … ကြှနျမကို … မညှာတော့ဘူး … သူ့ဟာက … တထဈခငျြး ဝငျခလြာတာ … အရမျးကဉျြးတဲ့ … ပနျးလေးထဲက အသားစိုငျတှကေို … ထိုးခှဲပွီး … ဝငျလာပါတယျ … ကွပျလိုကျတာရှငျ … ကွပျလိုကျတာ … နာလိုကျတာလညျး … အရမျးပဲ … အသားနုလေးတှကေို … ပှတျတိုကျသှားတဲ့ … မောငျ့ရဲ့ ဟာက … သံခြောငျးလောကျကို မာလိုကျတာရှငျ … “အား … တျောပါတော့ … မောငျရယျ … တို့မခံနိုငျဘူး … ဟငျ့ … အရမျး နာတယျကှာ …” “ခဏလေးပါ … မရယျ … ခဏလေးပါ … “ ကြှနျမလေ … ဇောခြှေးလေးတှေ ပွနျလာပါတယျ … နာလှနျးတော့ အောကျကနေ … လူးလှိမျ့ နတောပဲရှငျ … မောငျ ကြှနျမ … ရငျသားတှကေို … လာနမျးတယျ … လညျတိုငျလေးတှကေို … နမျးတယျ … လကျလေးက … ရငျသားတှကေို … နယျပေး တယျ … အို … ဟငျ့ … အောကျကလညျး နာ … အပျေါကလညျး ယား … ကြှနျမ တကိုယျလုံး … မောငျ့ရငျခှငျအောကျမှာ … လူးလိမျ့နတောပဲရှငျ … မောငျ လေ … ကြှနျမ ရငျသားထိပျဖြားလေးကို … ညှဈပွီး ခပြေေးပါတယျ … အို … ကောငျးလိုကျတာရှငျ … နာကငျြတာတှေ မပြေ့ောကျသှားအောငျ … မောငျလုပျ တတျတယျနျော … စောကျခေါငျးလေးထဲ နဈဝငျနတေဲ့ … မောငျ့ဟာကွီးကိုတောငျမသှေ့ားတယျ … မောငျလေ … သူ့ဟာကို … အထဲမှာ မှနေတေယျ … ထကျအောကျ ဘယျညာ … ဖမျးမရ … ညှဈမရအောငျ … မှယေ့မျးနတေော့ … ကြှနျမ တကိုယျလုံး ထူပူသှားတာပဲရှငျ … ရငျထဲမှာလညျး … လှိုကျကနဲ ဖိုက နဲ … အို … မောငျရယျ … ခဈြတယျ မောငျရယျ … ခဈြတယျ …
မောငျလေ … သူ့ခါးကို ဆတျကနဲ ဖိခပြဈလိုကျတော့ … မောငျ့ဒုတျက … ပနျးလေးထဲ … အတငျးဝငျခလြာပါတယျ … မောငျလေ … ကြှနျမ ပနျးလေးထဲက … တဈခုခုကို … ထိုးခှဲပဈလိုကျတယျ … ဆဈကနဲ … နာကငျြမှုက … အသညျးခိုကျအောငျ … နာလိုကျတာရှငျ … “အား … နာတယျ … နာတယျ … ဟငျ့ … ဟီး … မောငျ အရမျးရကျစကျတယျ” “အရမျးနာသှားလား မရယျ … မငိုနဲ့နျော … တိတျ တိတျ … မ အပြိုမွှေးလေး ပေါကျသှားပွီ” “အို … ဟငျ့ … ဟီး …” ကြှနျမ … အပြိုမွှေးလေး ပေါကျသှားပွီတဲ့ … ဟငျ့ … နာလိုကျတာရှငျ … ဒါဆို … ကြှနျမ … အပြိုမဟုတျတော့ဘူးပေါ့ … မောငျလေ … ကြှနျမ အပြိုပနျး လေးကို … ဆှတျခူးသှားပွီ … နာလှနျးလို့ … ရုနျးကနျပဈနတေဲ့ ကြှနျမကို … အနမျးတှေ တရစပျ ပေးတော့တာပဲ … ကြှနျမလေ … ဝမျးနညျးလှနျးလို့ … မကျြရညျလေးတှေ စီးကလြာပါတယျ … “မငိုပါနဲ့ … မ ရယျ … မောငျက ခဈြလှနျးလို့ပါ” “ဟငျ့ ဟငျ့ …” ငိုနတေဲ့ ကြှနျမ နှုတျခမျးလေးတှကေို နမျးရငျး … မောငျလေ … အဆုံးထိထိုးထညျ့ထားတဲ့ … မောငျ့ဒုတျကို … ပွနျထုတျလိုကျပါတယျ … “ဟငျ့ … ဟငျ့ … ရှီး” ကြှနျမလေ … မကျြစိမှိတျထားရာကနေ … အတငျးပဲ ထကွညျ့ပါတယျ … မောငျ မကောငျးဘူး … ရကျစကျတယျ … ကြှနျမပနျးလေးထဲက … ဆှဲထုတျလာတဲ့ မောငျ့ဒုတျ … နညျးတာကွီးမဟုတျဘူး … ကြှနျမ လကျကောကျဝတျနီးပါးလောကျရှိတာကွီးကို … မောငျ ထညျ့ရကျတယျ … ဟငျ့ … ဒီလောကျကွပျနတေဲ့ … ပနျးလေးထဲ ထညျ့တော့ … အထဲမှာ ကှဲ ပွဲကုနျပွီလား မသိပါဘူး … ဟငျ … မောငျ့ဒုတျမှာ … သှေးတှနေဲ့ …
“အို … သှေးတှနေဲ့ … မောငျ “ “အပြိုမွှေးပေါကျသှားတာ … မ ရဲ့ … စိတျမပူပါနဲ့ … အစမို့ နညျးနညျးလေး နာတာပါ …” “သှားပါ … မောငျ အရမျး ရကျစကျတယျ … ဒီမှာ သှေးတှေ ထှကျနပွေီ …” ပနျးလေးထဲက … အရညျတှနေဲ့ အတူတူ သှေးတှေ ထှကျလာပါတယျ … “လာပါ … မ ရယျ … စိတျမဆိုးရ ဘူးနျော … ဆကျခဈြခငျြတယျ မရယျ … လာပါ …” “အို … ဟငျ့အငျး … ဟငျ့အငျး …” မောငျ အရမျးဆိုးတယျ … ကြှနျမကိုလေ … အတငျး တှနျးခပြွီး … ပနျးလေးထဲကို … မောငျ့ဒုတျကွီးနဲ့ … တပွေီ့း … ဆောငျ့ခပြဈလိုကျပါတယျ … “အား … နာတယျ … နာတယျ … ဟငျ့” မောငျက … အတငျးပဲ … ကြှနျမကို မညှာဘူး … စပျဖငျြးဖငျြး ဖွဈနတေဲ့ … ပနျးလေးက … ဒေါသတကွီး … မောငျ့ဒုတျကို … ညှဈပဈလိုကျတယျ … ကဲ … မှတျပွီလား … မောငျရေ … “ဟာ … ဟာ … အရမျးညှဈတယျ … မရယျ … အရမျးညှဈထားတယျ …” ဒီတဈခါ … အျောရတာက … မောငျလေ … ကောငျးတယျ မှတျပွီလား … သူမြားကို … မ ညှာမတာ … သှေးထှကျအောငျလုပျတဲ့ မောငျ …
ကြှနျမလညျး … အရမျးနာတာပဲ … နာတာပြောကျသှားအောငျ … အတငျးညှဈထားတော့ … မောငျ လုပျမရ တော့ဘူးပေါ့ … မောငျလေ … ကြှနျမ ဒီလို ညှဈနတောကို … အရမျးဖီးတှနေ့တေယျထငျပါရဲ့ … အတငျးပဲ … ဆှဲထုတျတယျ … ကြှနျမက အတငျးညှဈထား တယျ … ဟငျ့ … ဟငျ့ … ပနျးလေးထဲက … မောငျ့ဒုတျကွီးက … ပွနျထှကျသှားပွီ … ရငျထဲမှာ ဟာကနဲ ဖွဈသှားတယျ … ခကျြခွငျးပဲ … မောငျ ပွနျထညျ့ တယျ … ဟာ … အား အား … ဆီးခုံနှဈခု … ဂဟဆေကျသှားတဲ့အထိ … မောငျထိုးထညျ့တယျ … မောငျ့ဒုတျက ရှညျလိုကျတာရှငျ … ကြှနျမ သားအိမျကို … ဒိနျးကနဲ လာဆောငျ့တဲ့အထိ … ထညျ့ပဈလိုကျတော့ … မကျြလုံးတှေ ပွာသှားတာပဲ … ဒီလိုနဲ့ … အဝငျအထှကျတှကေ … တဖွေးဖွေး မွနျလာပါတယျ … ကောငျးလိုကျတာရှငျ … အပြိုမွှေးပေါကျသှားတဲ့ နာကငျြခံစားမှုတှေ … ပြောကျသှားပွီး … ကြှနျမစိတျတှေ … ခဈြရမကျခိုး ဝနေပေါတယျ … မောငျ့ဒုတျ ဝငျ လာရငျ … ခါးလေးကို ယမျးခါလိုကျ … ပွနျထှကျခါနီး … ညှဈထားလိုကျနဲ့ … ဖီလငျတှေ တကျလာပါတယျ … အျော … ဒါကွောငျ့လညျး … အိမျထောငျပွုကွ တာကိုး … ဒီအရသာက … ဘာနဲ့မှကိုမတူတာပဲရှငျ … မောငျလေ … ကြှနျမ ဂြိုငျးနှဈဖကျအောကျကို … လကျထညျ့လိုကျပါတယျ … လြှိုပွီး … ပခုံးနှဈဖကျ ကို … အတငျးဆုပျပွီး … ဖိဆောငျ့ပဈလိုကျ တယျ …
“ဗွဈ … ဗွဈ … စှတျ … စှိ … အငျ့ … အီး … ဟငျ့ … ဟငျ့ … အား … အား “ အရမျးပဲရှငျ … နားထငျတှေ ပူထူသှားအောငျ … ဆကျတိုကျ … ဆောငျ့ပဈနေ တယျ … မောငျလေ … အတငျးပဲ ဆောငျ့တော့ … ကြှနျမ ရုနျးမရတော့ဘူး … ကောငျးလိုကျတာရှငျ … ကောငျးလိုကျတာ … ငွီးသံလေးက … အခနျးထဲမှာ ကယျြလာတော့ … အတငျး နှုတျခမျးကို … ကိုကျလိုကျပွီး … အောကျက … တငျသားကို … ကော့ပဈလိုကျတယျ … ဆောငျ့ပတေော့ … မောငျရေ … ဆောငျ့ … မောငျခဈြသမြှ … တို့ လိုကျလြောမယျ … မောငျခဈြလို့ အသကျထှကျရငျလညျး ထှကျပါစတေော့ … မတတျနိုငျတော့ဘူး … မောငျ့ ဆောငျ့ခကျြတှကေ … မှနျမှနျနဲ့ အားပါတော့ … နညျးနညျးတော့ အောငျ့တယျရှငျ့ … မောငျ့ရဲ့ ဆောငျ့ခကျြကွမျးကွမျးတှကွေောငျ့ … မှယေ့ာထူထူပျေါက … ပွနျကနျထှကျလာတဲ့ ကြှနျမတငျသားတှကေို … မှယေ့ာထဲ တငျပါးကွီး မွုပျသှားအောငျ ဆောငျ့ခလြိုကျနဲ့ … မောငျအခဈြကွမျးနပေါတယျ … ကောငျးလိုကျတာရှငျ … နာနပေေ မယျ့ … မောငျခဈြတာ အရမျးကောငျးတယျ … အီစိမျ့နအေောငျ … ကောငျးတဲ့ မောငျ့ဆောငျ့ခကျြတှအေောကျမှာ … ကြှနျမပနျးလေး … ကှဲခငျြကှဲပလစေ့ေ တော့ရှငျ … မောငျဆောငျ့တာ ပိုပွီး ထိအောငျ … အောကျကနေ ကော့ကော့ပေးနမေိတယျ … ကော့ပေးတော့လေ … မောငျ့ဆောငျ့ခကျြတှကေ ပိုပွီးထိ တယျရှငျ့ … ဒါပမေယျ့ ကနြေပျပါတယျ … နာပမေယျ့ အရမျးကောငျးတော့ … ခွထေောကျတှကေို … လထေဲမှာ ဟိုကနျဒီကနျ ကနျမိပါတယျ … နောကျဆုံး သုံးခကျြလောကျမှာ … မခံနိုငျတော့ဘူးရှငျ့ … အဝငျအထှကျကွမျးနတေဲ့ … မောငျ့ဒုတျကွီး … တုံ့ကနဲ ဖွဈသှားအောငျ … ညှဈပဈလိုကျတယျ … ကြှနျမလေ … အရမျးထနျနတေော့ … ခါးလေးကိုပါ လိမျပဈလိုကျတယျ …
“အား … ဟငျ့ … ဟငျ့ … ရှီး … မောငျ … မောငျ “ ကြှနျမလေ … မောငျ့နာမညျကို အတငျးချေါရငျး … ပနျးလေးထဲက … အရမျးယားလာပွီး … ပွှတျကနဲ … ခဈြဝတျရညျတှေ ထုတျပဈလိုကျတယျ … ကောငျးလိုကျတာရှငျ … ကောငျးလိုကျတာ … ကာမအရသာရဲ့ အဆုံးသတျ ခံစားမှုက … ကြှနျမရငျတှေ တငွိမျ့ငွိမျ့ ပါပဲရှငျ … မောငျ့ကို … အတငျးဖကျထားရငျး … မော့ကွညျ့လိုကျတော့လေ … မောငျ့မကျြနှာမှာ ခြှေးတှေ ပွနျနတေယျ … အို … မောငျရယျ … ခြှေးထှကျရ လောကျအောငျ … ခဈြရသလားရှငျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့ မကျြနှာပျေါက … ခြှေးလေးတှကေို … သုတျပေးလိုကျပွီး … “မောငျရယျ … အရမျးကောငျး တယျကှယျ …” “ဟုတျတယျ … မရယျ … အရမျးကောငျးတယျ … ဒါပမေယျ့ … မောငျ မပွီးသေးဘူး …” “အို …” ဘယျလိုလုပျရမလဲဟငျ … ကြှနျမ အရညျတှေ ထှကျတာ ခဏခဏရှငျ့ … မောငျကတော့ ပွီးသေးဘူးတဲ့ … “မောငျ့ … အရမျးမောနရေငျ … ခဏလောကျနားပါလားကှယျ” “ဟငျ့အငျး … မ ရဲ့ … အဖုတျက … အရမျးခလြို့ကောငျးတယျ …” “အို … မောငျကလညျး …” ကြှနျမလေ … မောငျ့ကို သိပျခဈြပမေယျ့ … ဒီလိုမြိုး စကားလုံးကွမျးကွမျး တှကေိုတော့ နားရှကျတယျရှငျ့ … ဒါပမေယျ့ … မောငျ မပွီးသေးတာကို … အားမလိုအားမရဖွဈမိတယျရှငျ့ … မောငျ့ကိုလညျး … ကြှနျမလို … ကနြေပျ နှဈသိမျ့မှုပေးခငျြတယျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့ကို သိပျခဈြသှားတော့ … အတငျးပဲ အောကျကနေ … ကော့ကော့ပေးတယျ … ညှဈပေးတယျ … မောငျလေ … အရမျးထနျလာတော့ … ကြှနျမ ခါးလေးကို အတငျးမပွီး … ပနျးလေးထဲကို … အတငျးဆောငျ့ခနြတေော့တာပဲရှငျ … ကြှနျမလေ … စကျသနေတျပဈသလို မောငျ့အခဈြတှကွေောငျ့ … ဗလုံးဗထှေးနဲ့ … ငွီးတှားနပေါတယျ … “အား … ဟာ … ဟာ … မ … မောငျ … ပွီးတော့မယျ … ပွီးတော့မယျ …” အဝငျအထှကျတှကေ … မွနျလှနျးလို့ … ကြှနျမ ပနျးလေးကလညျး … မညှဈနိုငျတော့ဘူးရှငျ … ခါးလေးကို ကော့ထားတော့ … ပနျးလေးက … ပိုဟပေးနေ သလိုနဲ့ … အရညျတှေ ရှဲနတေော့ … မောငျ ဝငျသမြှ ထှကျသမြှ … အဆငျခြောနတောပေါ့ရှငျ … မောငျလေ … နောကျဆုံး အခကျြမှာ … အတငျးပဲ … ဆောငျ့ခလြိုကျတာ … ကြှနျမ သားအိမျထဲထိ … သူ့ထိပျဖြား ဝငျခလြာပါတယျ … ဖှတျကနဲ … ဝငျသှားတဲ့ … ခံစားခကျြက … ဒီတသကျမမနေို့ငျတော့ပါဘူး …
“အား … နာတယျ … မောငျ … မောငျ …” “ရှီး … ပွီးပွီ … မရေ … ပွီးပွီ … ရှီး … ကောငျးလိုကျတာ မရယျ … ကောငျးလိုကျတာ” ဟှနျ့ … မောငျလေ … တ ဇတျဇတျနဲ့ တကိုယျလုံးတုနျပွီး … အရညျတှေ ပနျးထုတျပဈလိုကျပါတယျ … အားရလိုကျတာရှငျ … မောငျလေ … သူ့ဒုတျထဲက … ပနျးထုတျပဈလိုကျတဲ့ … အရညျတှကေ … မီးသတျပိုကျလိုပဲ … ပွငျးလိုကျတာ … ပွှတျကနဲ … ကြှနျမ ပနျးလေးကို .. နှေးသှားအောငျ … ပနျးထုတျပဈလိုကျတာ … ကောငျးလိုကျတာ ရှငျ ကောငျးလိုကျတာ … မောငျလေ … အရညျတှလေညျး ထှကျပွီးသှားရော … ကြှနျမဘေးမှာ … လှဲခပြွီး … မောနတေယျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့ လကျမောငျးပျေါမှာ ခေါငျးအုံးပွီး … မောငျ့ကို ဖကျထားရငျး … “မောငျ … အရမျးမောနပွေီမှတျလားဟငျ” “မောတော့ မောတာပေါ့ … မ ရယျ … ဒါပမေယျ့ မမောဘူး” “တို့ကို … ခဈြတယျမှတျလားဟငျ” “ခဈြတာပေါ့ မရယျ … ခဈြတာပေါ့” “တို့လညျး မောငျ့ကို … အရမျးခဈြတယျကှယျ … မောငျက ဆိုး တယျနျော” “အနျ … ဘာကို ဆိုးတာလဲ မကလဲ” “တို့ကို သှေးထှကျအောငျ … လုပျတယျ အရမျးနာအောငျလုပျတယျ” “ဟား ဟား … မကလညျး ကလေး ကနြတောပဲ … မက အပြိုလေးလေ … ပထမဆုံးအကွိမျမှာ သှေးထှကျမှာပေါ့ … အရမျးနာသှားလားဟငျ” “နာတာပေါ့ မောငျရယျ … အသညျးခိုကျအောငျ နာတာပေါ့” “နာပွီးတော့ … ကောငျးတယျမှတျလားဟငျ” “ပွောမပွတတျအောငျ … အရမျးကောငျးတယျ … ရှတျ” ကြှနျမလေ … မောငျ့ကို အရမျးခဈြမိ သှားလို့ အသဲယားလှနျးလို့ … အနမျးတပှငျ့ပေးလိုကျပါတယျ … မောငျလညျး ကြှနျမကို ပွနျနမျးပါတယျ … ကြှနျမရဲ့ အပြိုစငျပနျးလေး မောငျခူးသှားပွီး နောကျ … နဲနဲတော့ ရဲလာပါတယျ … သိပျခဈြရတဲ့ မောငျနဲ့ ခဈြရတာ သိပျမဝသေးပါဘူး … တခါမှ မကွုံဖူးသေးတဲ့ ကာမအရသာကို … ကကြနြန ခံစား လိုကျရတော့ … ရငျထဲမှာ ဆန်ဒတှကေ ပှကျပှကျဆူနပေါတယျ … မောငျ ခဈြခငျြရငျ ဆကျခဈြလို့ရပါသေးတယျ … မောငျရယျ …
“မ … ထပျခဈြခငျြသေးတယျဗြာ” “အို … မောငျနျော” “မ … အဖုတျက … အရမျးကွပျတယျနျော” “ဟအေ့ေးနျော … မောငျ … ညဈတီးညဈပတျတှေ ပွောနဲ့ …” “မရဘူးကှာ … မနဲ့ မောငျက … လငျမယားတှေ ဖွဈနပွေီပဲဟာကို” “ဟအေ့ေးနျော … တို့ နားရှကျတယျ …” “မရှကျပါနဲ့ မ ရယျ … မ အဖုတျလေးကို … ဖွဲပေးထားနျော” “ဟအေ့ေး … ဟအေ့ေး” ကြှနျမလေ … မောငျ့အခဈြကွမျးကွမျးတှေ လကျခံပွီးပွီဆိုပမေယျ့ … အဲဒီလို လုပျပေးရမှာတော့ ရှကျမိပါ တယျ … မောငျ့ကို ခဈြတော့လေ … ရှကျပမေယျ့ … ပေါငျလေးကိုသာ ကားပေးလိုကျတယျ … မောငျကလညျး ဘာမှ မပွောတော့ပါဘူး … မောငျလေ … အရညျတှေ စိုရှဲနတေဲ့ ကြှနျမပနျးလေးကို … မတျမတျမောမောကွညျ့ပွီး … မောငျ့ဟာကွီးနဲ့ … တလေို့ကျပါတယျ … “ဟာ” ငွီးသံလေးကို မတားဆီးနိုငျခငျ … ပါးစပျဖြားက ထှကျသှားပါတယျ … မောငျ့ဟာက … ကွီးကို ကွီးတာရှငျ့ … တခါအခဈြခံပွီးပွီဆိုပမေယျ့ … ကြှနျမပနျးလေးက … ကဉျြးကွပျနဆေဲ ပါ … မောငျ ထိုးထညျ့လိုကျတော့ … အောကျနှုတျခမျးလေးကို … အတငျးကိုကျထားရငျး … မောငျ့ကို တအားဖကျထားလိုကျတယျ … နာလိုကျတာ မောငျ ရယျ … အရညျတှကွေောငျ့ … အဝငျခြောပမေယျ့ … စပျဖငျြးဖငျြး ဒဏျရာက … နာလိုကျတာရှငျ … မောငျလေ … ကြှနျမကို … နှဈသိမျ့တဲ့ အနနေဲ့ … အနမျး တှေ လြှောကျပေးနတေယျ … တျောပါ မောငျရယျ … လူကို ညာပွီး … အရမျးလုပျတယျ ….
ဟငျ့ … ကြှနျမလေ .. ပေါငျတှကေို … အတငျးကားပေးလိုကျပါ တယျ … မဆနျ့မပွဲ ဝငျခလြာတဲ့ … မောငျ့ပစ်စညျးကို … မခံနိုငျဘူးရှငျ့ … မောငျက တအားစိတျထနျနပွေီနဲ့ တူပါရဲ့ … ကြှနျမကို ဖကျထားရာကနေ … နညျး နညျးထပွီး … ကြှနျမ ပေါငျနှဈခြောငျးကို … ပိုကားပဈလိုကျပွီး … ဖိခလြိုကျပါတယျ … “ဟာ … နာတယျ … မောငျ … မောငျ” ကြှနျမပုံစံက … ပကျလကျ ကလေး … ဖွဈနပွေီး … ခွထေောကျတှကေ … ဖားလေးလို ကားကားလေး ဖွဈနပေါတယျ … ကြှနျမဖငျသားကွီးတှကေ … အတငျးကော့ပေးနသေလိုဖွဈ နတေော့ … ပိုထိတာပေါ့ရှငျ … အစ တခကျြ နှဈခကျြ … ဖွေးဖွေးလုပျပမေယျ့ … နောကျပိုငျး … မောငျ ကွမျးတော့တာပါပဲ … သိမျ့ကနဲ သိမျ့ကနဲ အနီးကပျ ဆောငျ့ခကျြတှကေ … ကြှနျမ စိတျတှေ ဆောကျတညျရာမရဖွဈအောငျ … ပွငျးထနျလှနျးပါတယျရှငျ … မောငျ့ရဲ့ ဆောငျ့ခကျြတှကေ … ကြှနျမ ပနျးလေးကို နာကငျြစတေယျဆိုပမေယျ့ … နာကငျြခွငျးနဲ့ အတူ ခံစားရတဲ့ … အရသာလေးကို … တဖွေးဖွေးနဲ့ နှဈသကျလာပါတယျ … မောငျ့ရဲ့ အနီးကပျဆောငျ့ခကျြ တှကေို … ကြှနျမလေ … ကောငျးလှနျးလို့ အောကျကနေ ပွနျပွနျပွီး ပငျ့တငျပေးပဈလိုကျတယျ … မောငျလညျး ကြှနျမလို ခံစားခကျြတှေ ပွငျးထနျလာလို့ နမှောပေါ့ … ပါးစပျထဲက ငွီးတှားသံတှေ ထှကျလာပါတယျ … တို့လုပျပေးတာ … ကောငျးရဲ့လား … မောငျရယျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့လညျပငျးကို အောကျကနေ အတငျးဖကျထားရငျး … ကြှနျမတငျဆိုငျကွီးတှကေို … မှယေ့ာနဲ့ လှတျတဲ့အထိ … ကော့ကော့ပေးလိုကျတယျ … မောငျလေ … သဘောတှေ ကလြှနျးလို့ … အားကုနျဆောငျ့တော့တာပဲ …
“အို … ဟာ …. ဟာ” “ဟငျ့ … ထိတယျ … မောငျရယျ … အရမျးပဲ” မောငျ နညျးနညျးမောလာလို့ ထငျပါရဲ့ … ကြှနျမကိုယျပျေါကို နညျးနညျး ပိကလြာပွီး … ဆကျတိုကျဆောငျ့ပါတယျ … မောငျ့ရဲ့ ဒုတျက … ကြှနျမပနျးဖူးလေးကို … ပှတျပှတျဆှဲသှားတာမြားရှငျ … ကောငျးလိုကျတာ ပွောမနပေါနဲ့ … အသဲထဲမှာ ပွောငျးဆနျသှားတာပဲ … မောငျလေ … အားတကျလာလို့ထငျပါရဲ့ … ကြှနျမ ရငျနှဈမှာကို … အတငျးနယျတော့တာပဲ … “အာ … ဟာ …. ဟာ” “နာတယျ … မောငျရယျ …” “တျောပါတော့ … ဟငျ့ … ဟငျ့ …” ပါးစပျက တျောပါတော့ဆိုပမေယျ့ … အောကျကနေ … အတငျးကော့ကော့ပေးနတော … ကောငျး လှနျးလို့ပါရှငျ … မောငျ … ကြှနျမ ရငျသားထိပျဖြားလေးကို … ဖိပွီး ခတြေော့ … မခံနိုငျတော့ဘူး … စိတျတှေ အရမျးထနျလာပွီး … သှေးတှကေ ပှကျပှကျဆူ မတတျ ဖွဈကုနျတာပါပဲ … ကြှနျမလေ … အတငျးအျောရငျး … ဘယျလိုဘယျလို … မောငျ့ပျေါကို ရောကျသှားမှနျးမသိပါဘူး … မောငျ တအားလညျတယျ … ကြှနျမကိုယျလေးကို … အတငျးဖကျထားပွီး … ဆှဲလှညျ့လိုကျတော့ … မောငျက အောကျမှာ … ကြှနျမက အပျေါမှာ … ရှကျလိုကျတာရှငျ … ပထမဆုံး စ ခဈြကွတဲ့နမှေ့ာ … မောငျနညျးမြိုးစုံနဲ့ ကြှနျမကို ခဈြနတေော့တာပဲ … ခဈြပါမောငျရယျ ခဈြပါ … မောငျ ခဈြသမြှကို လိုကျလြောဖို့ အသငျ့ပါပဲ … မောငျ့ပျေါ မှာ ကြှနျမ ရောကျတော့လေ … ခံစားခကျြက တမြိုးကွီးပဲရှငျ့ … အောကျကနေ ထောငျပွီး တငျးမာနတေဲ့ မောငျ့ဒုတျကွီးက … ပိုကွီးလာတယျလို့ ခံစားရပါ တယျ … အတငျးကားထားပမေယျ့ … မရဘူးရှငျ့ …
ကြှနျမပနျးလေးက … ပိုကွပျသှားလိုနဲ့ … မောငျ့ဟာကို အတငျးညှဈထားပဈလိုကျတယျ … မောငျ့ရငျခှငျ ထဲမှာ … လှဲပွီး မှီနတေဲ့ ကြှနျမကို … မတျမတျလေးဖွဈသှားအောငျ … မောငျ တှနျးလိုကျပွီး … ခါးကို ကိုကျကာ … ဖွေးဖွေးခငျြးဆောငျ့နညျးလေး သငျပေး ပါတယျ … ကြှနျမ သဘောပေါကျပါတယျ … မောငျ့အကွိုကျလိုကျလြောဖို့ ဖွေးဖွေးလေး … ဆောငျ့ပေးလိုကျပါတယျ … ကောငျးလိုကျတာရှငျ … ကောငျး လိုကျတာ … အောကျကနေ … ဒုံးပြံလို ထောငျမတျနတေဲ့ မောငျ့ဒုတျကို … အပျေါကနေ တကျဆောငျ့ရတာ သိပျတော့ မသကျသာလှဘူးရှငျ့ … တခကျြတ ခကျြ … ကြှနျမ သားအိမျကို လာလာဆောငျ့တာ အောငျ့ကနဲ ဖွဈဖွဈသှားတယျ … ဒါပမေယျ့ ကောငျးလှနျးလို့ … သိပျကွာကွာ မဆောငျ့နိုငျပါဘူး … စိတျ ထငျ လေးငါးဆယျခါလောကျပဲ ဖွဈမယျထငျတယျ … မရတော့ဘူး … ပနျးလေးထဲက … ဝတျရညျပေါကျကှဲမှုနဲ့ အတူ … ကြှနျမ အျောငွီးပွီး … အရညျတှေ ပွှတျကနဲ ထှကျသှားပါတယျ … ကြှနျမလေ … တကိုယျလုံး အားယုတျသှားသလို ဖွဈပွီး … နညျးနညျးတော့ အိပျခငျြလာပါတယျ … မောငျ ခဈြလို့ မဝသေး ဘူးဆိုတာ … ကြှနျမသိပါတယျ … မောငျ့ကို ကြှနျမ ခေါငျးနဲ့ ဝှပွေီ့း … မှီအိပျနရေငျး … အပျေါကနေ … ဖွေးဖွေးလေး ဆောငျ့ပေးပါတယျ … ကောငျးလိုကျ တာရှငျ … ပနျးလေးထဲကို ဝငျနတေဲ့ မောငျ့ဒုတျက … သံခြောငျးကနြတောပဲရှငျ … မာပွီးတောငျ့တငျးနတေဲ့ … မောငျ့ဒုတျက ကြှနျမ ပနျးဖူးလေးကို ခပျပွငျး ပွငျးပှတျဆှဲတာမြား … တခကျြတခကျြ ဆှမြေိုးမသှေ့ားလောကျတယျ … မောငျလေ … ကြှနျမခါးလေးကို ကိုငျပွီး … စကောဝိုငျးလို မှခေိုငျးတယျ … စိတျခြ မောငျရေ … မောငျ့အကွိုကျ … ကြှနျမဖငျလေးကို အနောကျကို အစှမျးကုနျကော့ထားရငျး … စကောဝိုငျးလို မှပေေးလိုကျတယျ … အား …. ဟာ … ကောငျး လိုကျတာ မောငျရယျ … တို့ သိပျမလုပျတတျသေးပမေယျ့ … မောငျကွိုကျမယျ ထငျပါတယျ … ကွပျစီးနတေဲ့ ကြှနျမပနျးလေးထဲမှာ … မောငျ့ဒုတျက … အသားနုလေးတှကေို … အီစိမျ့လောကျအောငျ … ပှတျပှတျဆှဲနတော … ကောငျးလိုကျတာရှငျ …
ကြှနျမ စိတျတှေ ထိနျးမရအောငျ … ကောငျးလှနျးလို့ … မောငျ့အပျေါမှာ … ခပျပွငျးပွငျး အဆကျမပွတျဆောငျ့ပေးလိုကျပါတယျ … မောငျလေ … ရနေဈတဲ့ လူလိုပဲ … အတငျး … ခေါငျးအုံးကို ဆှဲလိုကျ … မှယေ့ာခငျးကို ဆှဲလိုကျနဲ့ … ဆောကျတညျရာမရဘူး ဖွဈနတေယျ … ဟား ဟား … မှတျပွီလား မောငျ … သူ့ အလှညျ့တုနျးက … အသကျရှူလို့ မရအောငျ … လုပျခဲ့တာလေ … အခု တို့အလှညျ့ရောကျတော့ … မောငျ အသကျရှူမဝတော့ဘူး မှတျလား … ကြှနျမလေ … မွငျးစီးသလို … ဖငျကို အနောကျကို ကော့ထားလိုကျ … သိမျ့ကနဲ အပျေါကို ရောကျသှားလိုကျ … ပွနျပွုတျကလြာလိုကျနဲ့ … ပွောမပွတတျအောငျ … ရမကျခိုးတှေ ဝနေပေါတယျ … ဒီအခြိနျမှာ ကြှနျမလေ … ဘာမှ မသိခငျြတော့ဘူး … မောငျ့ကို … အကောငျးဆုံး လုပျပေးခငျြတဲ့စိတျက … မောငျ့ဒုတျကို … ညှဈထားတဲ့ ပနျးလေးကို … အဆုံးရောကျတဲ့အထိ … ဖငျလေးကို ပွနျကွှပွီး … ပဈထိုငျပဈလိုကျတယျ … အားကနဲ ကြှနျမလေ နာသှားတယျရှငျ့ … ဒါပေ မယျ့ … အရမျးကောငျးလှနျးတော့ … မောငျ့ဟာကို အဆုံးထိ ထုတျလိုကျ … အဆုံးနားရောကျခါနီးရငျ … သိမျ့ကနဲ ထိုငျခပြဈလိုကျနဲ့ … မောငျတောငျ … အိပျ မနနေိုငျတော့ဘူး … ငေါကျကနဲ ထထိုငျခငျြစိတျတှေ ပျေါလာတယျနဲ့ တူတယျ … ဟငျး ဟငျး … ဘယျရမလဲရှငျ … ကြှနျမ … မောငျ့ … ရငျဘတျကို လကျနဲ့ ဖိ ထားပွီး … ဆကျတိုကျ … ဆောငျ့ပေးလိုကျပါတယျ … ဒီနရောမှာ ကြှနျမ တငျဆိုငျကွီးတှကေ အရမျးအသုံးဝငျတာပဲရှငျ … ကြှနျမသာ တငျသားသေးသေး လေးဆို … မောငျအားရပါ့မလား မသိပါဘူး …. အခုတော့ … မောငျ့အပျေါကနေ … သိမျ့ကနဲ ဆောငျ့ဆောငျ့ခပြဈလိုကျတာ … မောငျအရမျးသဘောကမြယျ ထငျပါတယျ … မောငျ့ဒုတျကို ညှဈထားရငျး … ပွနျကွှလိုကျ … စိတျကိုလှတျပေးပွီး … သိမျ့ကနဲ ဆောငျ့ခလြိုကျ … အောကျက မောငျက ပငျ့တငျပေးခြိနျနဲ့ အံကိုကျ … ဒုနျးကနဲ အဆောငျ့ခံရတော့ … ကြှနျမစိတျတှေ … လထေဲ ဝဲပြံနပေါတယျ … ကြှနျမလေ … ကြှနျမ နာကငျြနပေမေယျ့ … အောကျကနေ တိုးဝငျ လာတဲ့ မောငျ့ဒုတျကို … ယမျးခါသှားအောငျ … တငျသားဆိုငျတှကေို စကောဝိုငျးလို မှပေေးလိုကျနဲ့ ကြှနျမ စိတျကွိုကျ လုပျခငျြတိုငျးလုပျရငျး … အရညျတှေ က ပှကျကနဲ ပှကျကနဲ အနျကလြာပါတယျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့ကို အရမျးဆောငျ့ပေးတော့ … မောလိုကျတာရှငျ … နညျးနညျးကွာတော့ … ကြှနျမ မလှုပျ နိုငျတော့ဘူး … အားမရှိတော့ဘူးရှငျ့ …
“မောနပွေီလား … မရယျ” “မောတာပေါ့ … မောငျရယျ … လှုပျတောငျ မလှုပျခငျြတော့ဘူး” မောငျ့ရငျခှငျထဲမှာ လှဲခလြိုကျပွီး … ကြှနျမလေ … မောငျ့ရဲ့ ရငျခုနျသံတှကေို နားထောငျကွညျ့လိုကျတယျ … တဒိနျးဒိနျးနဲ့ … မောငျ့ရငျခုနျသံတှကေ အကယျြကွီးပဲ … မောငျလညျး မောနပွေီနဲ့ တူတယျ … ဟငျး ဟငျး … ကြှနျမကွောငျ့ မောငျ့ရငျတှေ တအားခုနျတယျ ဆိုတာ သိသာပါတယျ … ကြှနျမ ကနြေပျသှားတယျ … မောငျ့ကို ခဈြခှငျ့ပေးလိုကျတာကို … ဘယျတော့မှ နောငျတမရပါဘူး … ကနြေပျစှာနဲ့ … မတှနျ့တိုတော့ဘူးကှယျ … “မောရငျ … အောကျမှာ ပွနျနနေျော … မောငျ အပျေါက ခဈြမယျ” “အို … မောငျ့ …” မောငျလေ … ကြှနျမကို အတငျးဖကျထားရငျး … ကိုယျကိုလှညျ့လိုကျတော့ … ကြှနျမက မောငျ့အောကျကို ပွနျရောကျသှားတယျ … မောငျ့ ဒုတျကွီးက … ကြှနျမပနျးလေးထဲမှာ … ဝကျအူရဈလှညျ့လိုကျသလိုပါပဲ … နာလိုကျတာရှငျ … အပြိုမွှေးလေး ကှဲပွဲပွီး စပျဖငျြးဖငျြး ဖွဈနတေဲ့ အထဲ … ဒီလိုမြိုး ထိုးမှေ လိုကျတော့ … နာလိုကျတာရှငျ … နာလှနျးလို့ ကြှနျမ တကိုယျလုံး တုနျတကျသှားရငျး … ကြှနျမ တငျဆုံကွီးက … အပျေါကို အတငျးကွှပဈလိုကျပါတယျ … “အား … နာတယျနျော … မောငျ့ …” မောငျလေ … ကြှနျမ ဒီလို အျောလေ … ပိုလုပျလပေဲ … သူ့ဒုတျကို … အတငျးဆှဲထုတျပွီး … အတငျးပွနျထညျ့တယျ … နာကငျြလှနျးလို့ ကြှနျမ ပနျးလေးကို … အတငျးညှဈထားတဲ့ကွားက … မောငျ့ဒုတျက … တထဈထဈနဲ့ ပွနျဝငျလာတယျ … အောငျမလေး မောငျရယျ … နာ လိုကျတာနျော … ဟငျ့ … ရကျစကျလိုကျတာ မောငျရယျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့ကို အတငျးဖကျထားတော့ … မောငျ အသှငျးအထုတျလုပျနတောတှကေို … ရပျလိုကျတယျ … နာကငျြလှနျးပမေယျ့ … မောငျရပျလိုကျတော့လညျး … ကြှနျမစိတျထဲမှာ လကျမခံခငျြပါဘူး … မောငျ့ကိုလေ … ဆကျလုပျစခေငျြပါတယျ … မောငျ ဘာလုပျမလို့လဲဟငျ … ကြှနျမလေ … မောငျ့ကို မော့ကွညျ့တော့ … မောငျက ဘေးနားက … ခေါငျးအုံးတလုံးကို … ကြှနျမ ဖငျအောကျထဲ ထညျ့ လိုကျတယျ … ကြှနျမဖငျတှကေ … အတငျးထောငျပေးသလို ဖွဈသှားတယျရှငျ့ … ပနျးလေးက အတငျးကော့ပေးသလို ဖွဈနရေငျး … မောငျ့ဒုတျက … အတှငျးသား နကျနကျကို … ပိုထိလာသလို ခံစားရပါတယျ … သပွေီ မောငျရေ … တို့တော့ … သပေါပွီကှယျ …
“အား … မောငျနျော … ဖွေးဖွေးလုပျနျော … ဟငျ့” “အရမျးထိတယျ … မောငျရယျ … အရမျးနာတယျ … ဟာ …. ဟာ …. အူး …. ဟငျ့ … ရှီး” ရမကျ သံတှေ လြှံထှကျလာအောငျ … မောငျလေ … အသှငျးအထုတျ … အထိုးအမွှုပျလေးတှေ လုပျပေးတာ … အရမျးကောငျးတယျရှငျ … ကြှနျမကလညျး ကြှနျမ ပဲရှငျ … ဖငျအောကျမှာ ခေါငျးအုံးခံထားလို့ … ကော့ပေးထားသလို ဖွဈနတေဲ့ကွားက … မနနေိုငျတော့ဘူးရှငျ … ခွဖေဝါးကို မှယေ့ာပျေါမှာ အားပွုပွီး … အတငျးကော့ကော့ပေးနတေယျ … မောငျရယျ … ဘယျလိုမြား … တို့ကို ခဈြနတောလဲကှယျ … ပနျးလေးထဲက … စပျဖငျြးဖငျြးနဲ့ ယားလှနျးလို့ … မနနေိုငျ တော့ဘူးကှယျ …“အို … အမေ့ … ဟာ …. ဟာ” “အရမျးမကွမျးနဲ့ … မောငျရယျ “ “နာတယျနျော … မောငျ့ …. ဟာ … ဟာ … ရှီး” “ဟာ … ဟငျ့အငျး … ဟငျ့အငျး … အဲဒီလို မမှနေဲ့လေ … အား …. ရှီး” ခဈြတာကွမျးလိုကျတာ မောငျရယျ … မောငျလေ … ကြှနျမခါးကို ကိုငျပွီး … အတငျး ဆောငျ့တာ … မောငျ့ ရဲ့ အနီးကပျဆောငျ့ခကျြတှကေ … ကြှနျမ မခံနိုငျတော့ဘူး … ရုနျးလို့လညျး မရတော့ … ခေါငျးကိုသာ အတငျးခါရငျး … မောငျ့လကျမောငျးကို … အတငျး ဆုပျကိုငျထားရတော့ပါတယျရှငျ … လုပျပါတော့ မောငျရယျ … သအေောငျသာ လုပျလိုကျတော့ … မောငျနျော … ခံစားခကျြတှေ ရမကျမီးတှကေ … ဟုနျးဟုနျးတောကျလောငျနလေို့ … ကြှနျမလေ … အရမျးပဲ ငွီးတှားနမေိပါတယျ … မောငျရဲ့ မကျြနှာကလညျး နီရဲတှတျနတောပဲ … ကွိုကျရဲ့လားဟငျ … မောငျ …
“ဟာ … ရှီး” ကြှနျမ … မခံနိုငျတော့ဘူး … ထှကျတော့မယျ … ထှကျတော့မယျ … ပနျးလေးထဲက … တဆဈဆဈနဲ့ … အတငျးညှဈထားရငျး … တရဈပွီး တ ရဈတကျလာတဲ့ … ကာမစိတျအပွငျးထနျဆုံးအခြိနျကို … ဘယျလိုမြိုးအဆုံးသတျရမှာလဲရှငျ … မခံနိုငျတော့ဘူး မောငျ့ …. မောငျ့ဟာကို … အတငျးညှဈထား ရငျး … ပွှတျကနဲ ထှကျသှားပါတယျ … မိနဈဝကျလောကျ ကွာခြိနျလေး အတှငျးမှာ … ကြှနျမစိတျတှေ … နတျပွညျကို ရောကျသှားသလိုပါပဲ … ငွိမျ့ကနဲ သိမျ့ကနဲ … ထူးကဲတဲ့ … ကာမအရသာက ကောငျးလိုကျတာရှငျ … ကောငျးလိုကျတာ … ကောငျးလှနျးလို့ … တကိုယျလုံးလညျး အားမရှိတော့ပါဘူး … မကျြစိဖှငျ့ဖို့တောငျ အားမရှိတော့လို့ … မှေးနရေငျး … မောငျ့ရဲ့ အဆုံးသတျဆောငျ့ခကျြတှကေို … အောကျနှုတျခမျးလေး ကိုကျပွီး … မောငျ့ဒုတျကွီးထဲက … ပနျးထှကျလာတဲ့ … အရညျပူပူတှကေို … ပနျးလေးထဲက တရဈရဈစုပျယူရငျး … တညလုံး မောငျခဈြသမြှ … အလိုလိုကျရငျး … မိုးစငျစငျလငျးသှားပါ တော့တယျရှငျ …
မ … အဝတ်တွေ လဲလိုက်ပါလားဟင် … ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆို …” “အင်း … မောင် … အပြင်ခဏထွက်ပေးနော် …” “နောက်ဖေးမှာ သံပုရာသီးရှိလား …” “ဘာလုပ်မလို့လဲဟင် …” “အော် … မောင့်မိန်းမက … ခေါင်းကိုက်နေတယ်မှတ်လား … သံပုရာရည်လေး ဖျော်တိုက်မလို့ပါဗျာ” “ဘာ … မောင့်မိန်းမ လဲ … ဟွန့် …” “မဟုတ်လို့လား … မရယ် … ဟောဒီမှာကြည့်ပါအုံး … လက်ထပ်စာချုပ် … မ နော် … အခုမှ … ဘွာတေးမလုပ်နဲ့ …” “ဟာကွာ … မောင်နော် … သိပ်မစနဲ့ကွာ … တို့ အရမ်းရှက်တယ် … ခဏအပြင်ထွက်ပေးနော် …” “အင်းပါ … အင်းပါ … သံပုရာသီး ဘယ်နားထားလဲဟင်” “ရေခဲသေတ္တာ အောက်ဆုံးဆင့်မှာ” “အိုကေ … ဖြေးဖြေးလဲနော်” မောင် … တံခါးလေးပိတ်ပြီး … အပြင်ထွက်သွားတယ် … ရင်စေ့အင်္ကျီလေးကို … ချွတ်လိုက်ပြီး … အောက်ခံဘော်လီကို … ဝတ်သင့်မဝတ်သင့် … စဉ်းစားလိုက်ပါသေးတယ် … ကျွန်မတကိုယ်လုံး ချွေးစေးတွေနဲ့ ကပ်စေးနေတော့ … မဝတ်ချင်တော့ပါဘူး … အရင်တုန်းကလည်း … ကျွန်မ အရမ်းအိုက်ရင် … ဝတ်လေ့မရှိပါဘူး … အောက်ခံဘော်လီလေးကို … ချွတ်လိုက်တော့ … သားကောင်းမိခင် ရင်နှစ်မွှာက … ဖွံ့ဖြိုးတင်းရင်းနေသည် …
မနက်ကလေ … မောင် အရမ်းနမ်းတော့ … ကျွန်မကော့ကော့ပေးတဲ့အဖြစ်က … သိပ်ရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲ … မောင်နမ်းတာ … မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ပြီး … ကော့ပေးလိုက်တာ … မကောင်းပါဘူးရှင် … မောင် … ထိပ်ဖျားလေးကို … အတင်းလိုက်ရှာတုန်းက … ကျွန်မ ရင်တွေ လှိုက်ဖိုမောခဲ့ရတာ … မခံစားတတ်အောင်ပဲရှင် … အို … ညကျရင် … မောင်က … ကျွန်မတကိုယ်လုံး နမ်းမှာပေါ့နော် … ဟင့် … ရှက်ပါတယ်မောင် ရယ် … မှန်တာဝန်ခံရရင် … မောင်နမ်းတာကို … ရှက်ပေမယ့် … ထပ်ပြီး အနမ်းခံကြည့်ချင်ပါသေးတယ် … ရင်ထဲမှာ … လှိုက်ကနဲ … ဖိုကနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ခံစားချက်ကို … မမေ့နိုင်တော့ပါဘူးရှင် … ထမီလေးကို … ချွတ်လိုက်ပြီး … ကျွန်မ ညဝတ်ဂါဝန်လေးကို … လဲနေတုန်း … မသင်္ကာလို့ … လှည့်ကြည့်လိုက် တော့ … တံခါးလေးက … ဟစိလေး ဖြစ်နေပါတယ် … အို … မောင်လေ … … ကျွန်မအင်္ကျီလဲတာကို … ချောင်းကြည့်နေတယ် … မောင် … တော်တော် လည်တယ် … ခုနက … တံခါးသေချာပိတ်သွားတာမှ မဟုတ်ပဲ … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို … ကြောက်လာတယ် … မောင်က … ကျွန်မကို အလွတ်ပေးမှာ … မဟုတ်တာ သေချာသွားပြီ … ဟင့် … မောင်နဲ့ ကျွန်မ … ချစ်တင်းနှောကြရင်ဖြင့် … ကျွန်မလေ … ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ အေးစက်လာပါတယ် …
“ဟာကွာ … မောင် … အရမ်းဆိုးတယ် … တို့ အဝတ်လဲနေတာ … ချောင်းကြည့်ရသလား” “မ … က အရမ်းလှတယ်နော် … မောင်အရမ်းကံကောင်းတာပေါ့ နော် …” “အို … သွားပါ …” “ဘယ်သွားရမှာလဲ … မရဲ့ … မင်္ဂလာဦးမှာ … သတို့သားကို … အဲဒီလို မနှင်ထုတ်ရဘူးလေ …” “အို …” ကျွန်မ … မျက်နှာလေး … ရှက်သွေးဖြာသွားပါတယ် … “မရှက်ပါနဲ့ မ … ရယ် … အခု ခေါင်းမူးနေသေးတယ် မှတ်လား … ရော့ … သံပုရာရည်လေး အရင်သောက်လိုက်နော် … မ” “ကြည့်စမ်းပါအုံး … မ ရယ် … ချွေးတွေချည်းပဲ … ချွေးနဲ့ အအေးပတ်ကုန်တော့မှာပဲ …” “အင်း … ခဏနေ ခြောက်သွားမှာပေါ့ … မောင်ရယ် …” မောင် ဖျော်လာတဲ့ … သံပုရာရည် ချဉ်ချိုလေးကို … သောက်ပြီး … ကျွန်မ ခေါင်းမူးတာ နည်းနည်း သက်သာသွားသည် … အင်း … ဒီလိုတော့လည်း … မောင်က … ချစ်တတ်သားပဲ … “မ … ခေါင်းမူးနေရင် … ခဏလှဲနေလိုက်နော် …” “အင် …” လှဲနေရမယ် … မောင့်အကြံ ဒါအကုန်ပဲလားဟင် … မောင်နဲ့ နှစ်ယောက် ထဲ ရှိတုန်း … ကျွန်မက … လှဲနေရင် … မောင့်အကြိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ … ကျွန်မက … မောင့်ကို … ကြည့်လိုက်တော့ … မောင့်ပုံစံက … ရိုးရိုးသားသားပါပဲ … “မ … စိတ်ထဲမှာ … မောင် … အတင်းဖက်နမ်းမယ်များ ထင်နေလို့လားဟင် …” “အို … မဟုတ်ပါဘူး … မနက်ကလိုဆိုရင် … တို့ ကြောက်တယ် …”
“ဟား ဟား ဟား … မနက်တုန်းက … ပျော်လွန်းလို့ ဖက်နမ်းလိုက်တာပါဗျာ … လာလှဲနေလိုက်နော် … မောင် နှိပ်ပေးမယ် … လာ … လာ” ကျွန်မလေ … မ လှဲချင်လှဲချင်နဲ့ … မွေ့ယာပေါ်ကို … လဲကျသွားပါတယ် … မောင်က ဘေးမှာလာထိုင်ပါတယ် … ကျွန်မက ပက်လက်ကလေးပေါ့ … မောင်လေ … ကျွန်မ မျက်ခုံးလေးကို … စနှိပ်ပေးတယ် … မောင်က ရိုးရိုးသားသားနှိပ်ပေးပေမယ့် … ရင်တွေ ခုန်နေတဲ့ … ကျွန်မက … မရိုးသားတာလားဟင် … ညဝတ်ဂါဝန် အောက်က … ရင်နှစ်မွှာက … ဖားဖိုကြီးလို … မို့လိုက် ဖောင်းလိုက်နဲ့ … စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ … မောင် တွေ့မှာပါလေ … “အို … မလုပ်ပါနဲ့ … မောင်ရယ် … ငရဲကြီးကုန်ပါ့မယ် …” “မကြီးပါဘူးကွာ … မျက်စိလေး မှိတ်ထားနော် … သေချာနှိပ်ပေးမယ်” လေးငါးမိနစ်လောက် … မောင် … သေချာနှိပ်ပေးပြီးနောက် … “ဘယ်လိုလဲ … အနှိပ်ခံရတာကောင်းတယ်မှတ်လားဟင် …” “အင်း … မောင်က တအားတော်တာပဲ …” “မ … နည်းနည်းနာမယ်နော် … ဒီ ငယ်ထိပ်က ဆံပင်စုလေးကို … ဆွဲပေးမယ် …” “အရမ်းနာအောင် … မလုပ်နဲ့ မောင်ရယ် …” “သိပ်မနာပါဘူး … တမိနစ်ပဲ ဆွဲမှာပါ … ဒါမှ မ ခေါင်းထဲက … အပူတွေ ပျောက်သွားမှာ …” “လုပ်ကြည့်လေ … နာရင်တော့ … အော်မှာနော် …” မောင် … ကျွန်မ ငယ်ထိပ်နားက … ဆံပင်စုလေးကို … ဆွဲလိုက်သည် … “အား … နာတယ် … နာတယ် … မောင် … လွှတ်ကွာ … အရမ်းနာတယ် …” “ခဏလေး … ခဏလေး … တမိနစ်ပဲ …” “ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … နာ တယ် … မောင်ရယ် … လွှတ်ပါတော့ …”
ကျွန်မလေ … နာလွန်းလို့ … ယောင်ယမ်းပြီး … မောင့်ပေါင်ကို … ကိုင်ထားမိတယ် … မောင့်ရဲ့ပေါင်ကလေ … မာတောင့်နေတာပဲ … မောင်က … ဝိတ် သွား သွား မထားတော့ … ကြွက်သားတွေက … မာပြီးတင်းနေတာပဲရှင် … ကျွန်မ … မောင့်ပေါင်ကြီးကို … ကိုင်လိုက်တော့ … မောင်လည်း တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွား တယ် … “အခု … အပူထွက်သွားပြီမှတ်လားဟင်” “အင်း ဟုတ်တယ်နော် … မောင်က အရမ်းတော်တာပဲ” “တော်ရမယ်လေ … မရဲ့ မောင်ပဲဟာ … ဟဲ … ဟဲ” “မောင် … ဖယ်တော့လေကွာ … “ “ဟင့်အင်းကွာ …” “မောင်နော် … ဖယ်ပါကွာ … တို့ ကြောက်တယ် …” “ဘာကို ကြောက်တာလဲဟင် …” “မောင့် ကို ကြောက်တာ …” “မောင်က … ဘာလုပ်လို့လဲဟင် …” “အို … မောင်နော် … သိရဲ့သားနဲ့ … ဟိုလေ … ဟာကွာ … တို့ … ကြောက်နေတယ်ကွာ …” “အင်း ပါ … မရယ် … ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး … ခြေလက်မျက်နှာ သွားဆေးလိုက်နော် …”
“အင်း …” ကျွန်မ … ရေချိုးခန်းထဲ … ဝင်ပြီး … ခြေလက်မျက်နှာဆေးရင်း … မထူးတော့ပါဘူး … တကိုယ်လုံးက … ချွေးစေးတွေနဲ့ … နံနေသလို ဖြစ်နေ တော့ … ရေချိုးလိုက်တယ် … တော်ကြာ … မောင်နမ်းလို့ … အနံ့ထွက်နေရင် … အထင်သေးသွားမှာ စိုးပါတယ် … ကျွန်မရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကလေ … အရမ်း တင်းပြီး … ထိပ်ဖျားလေးတွေက … ထောင်နေပါတယ် … ဘာကြောင့်မှန်းမသိတဲ့ … ခံစားချက်တမျိုးကို … ရင်ထဲက … တောင့်တနေပါတယ် … မောင့်ရဲ့ အ နမ်းတွေကိုလား … မောင့်ရဲ့ အထိအတွေ့တွေကိုလား … မပြောတတ်ပါဘူးရှင် … ပေါင်ကြားက ရွှေကြုပ်လေးထဲမှာလဲ … ချွဲပြစ်တဲ့ … အရည်တွေနဲ့ ကပ် စေးနေပါတယ် … သေချာ ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပြီး … အတွေးရိုင်းလေး … ဝင်လာပါတယ် … ညကျလို့ … မောင်နဲ့ ချစ်တင်းနှောရင် … မောင်က … ကျွန်မရဲ့ … ရွှေကြုပ်လေးကို … နမ်းမှာလားဟင် … မနမ်းလောက်ဘူးထင်ပါတယ် … မောင် ဘုန်းနိမ့်သွားမှာပေါ့ … ဟင့်အင်း … မနမ်းခိုင်းရက်ပါဘူး … အို … ငါ ဘာတွေ လျှောက်တွေးနေတာလဲမသိပါဘူး … ဒါပေမယ့် … အတွေးတွေကြောင့် … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး … တောင့်တင်းနေပြီး … တစ်ခုခုကို တောင့်တနေ တယ်ဆိုတာ … လိမ်လို့မရပါဘူးရှင် … မောင်ချစ်ချင်လည်း … ချစ်ပါစေတော့ … အပျိုစင်ပန်းဦးလေးကို … ချွေမယ်ဆိုလည်း … ချွေပါတော့ … မောင်ရယ် … တို့ … ခွင့်ပြုရမှာပေါ့ … ဟုတ်ဖူးလား … ရေချိုးပြီးနောက် … မျက်နှာသုတ်ပဝါကြီးကို … ကိုယ်လုံးလေးမှာ ပတ်ပြီး …. အပြင်ထွက်လာတော့ … မောင် စောင့်နေပါတယ် …
“အို … ဒုက်ခပါပဲ” ကျားရှေ့ မှောက်ရက်လဲသလိုပါပဲ … မျက်နှာသုတ်ပဝါက … တောင့်တင်းကျစ်လစ်တဲ့ … ကျွန်မကိုယ်လုံးလေးကို … လုံခြုံအောင် … ဘယ်ကာထားနိုင်ပါ့မလဲရှင် … ဖွံ့ထွားတဲ့ … ရင်နှစ်မွှာက … တဝက်လောက်ပေါ်နေပြီး … ဖြူဝင်းတဲ့ရင်သားဆိုင်တွေက … မို့မောက်ကာ … တင်းတင်းလေး ရုန်းထနေသည် … မောင်လေ … ကျွန်မကို … မြင်တာနဲ့ … အတင်းဖက်နမ်းတော့တာပဲရှင် … “အို … မောင် … မနမ်းနဲ့ကွာ …” “အို … ဟင့် … ပြောလို့လဲ မရဘူး …” မောင်လေ … ကျွန်မကိုယ်လေးကို … အတင်းဖက်ထားပြီး … မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို … လျှောက်နမ်းတော့တာပါပဲရှင် … ရှက်လွန်းလို့သာ … ရုန်းကန်နေတာ … ကျွန်မ ငြင်းဟန်လေးက … အားမရပါဘူး … မနက်က … မောင့်အနမ်းတွေကို … တမ်းတနေမိတော့ … မရုန်းမိပါဘူး … မောင်လေ … ကျွန်မကို … နမ်းနေရင်းနဲ့ … မွေ့ယာလေးပေါ်ကို … နှစ်ယောက်သား … လဲကျသွားပါတော့တယ် … မောင့်အနမ်းတွေက … မျက်နှာတစ်ခုလုံး လျှောက်နမ်း နေသလို … ကျွန်မရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကလည်း … မြန်လာပါတယ် …
အို … မောင်ရယ် … ကျွန်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို … လာနမ်းတဲ့ … မောင့်အနမ်းတွေက … ပူနွေးလွန်းပါတယ် … ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းအိအိလေးတွေကို … မောင် စုပ်ယူသွားတော့လေ … ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဗြောင်းဆန်သွားတာပဲရှင် … အို … မောင်ရယ် … မောင့်ရဲ့ လျှာလေးက … ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းကြားထဲ တိုးဝင် လာပြန်ပြီ … အို … အို … မောင်နော် … ဟင့် … ကျွန်မလျှာလေးကို … မောင် စုပ်ယူသွားလိုက်တာ … ကျွန်မ ရင်ထဲက အသဲတွေပါ … ပါသွားမတတ်ပါပဲရှင် … မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေက … ချိုမြိန်လွန်းတော့ … မျက်စိလေး စင်းပြီး … မောင့်ကို … တင်းတင်းဖက်ထားရင်း … မောင်ချစ်သမျှ ကျွန်မလိုက်လျောလိုက်ပါ တယ် … ဟင်း … အနမ်းတွေက … ငါးမိနစ်လောက်ကြာတယ် ထင်တယ် … မောင်နဲ့ … ကျွန်မ … ခဏလေး နမ်းတာရပ်သွားတော့ … သက်ပြင်းလေးခိုးချမိ ပါတယ် … မောင်ရယ် … ချစ်ချင်သလိုသာ ချစ်ပါတော့ … မောင်ရယ် … ကျွန်မရင်ထဲမှာလေ … မောင်ချစ်သမျှကို … လိုက်လျောချင်နေတဲ့ … ဆန္ဒအပြည့် ပါပဲကွယ် …
“အရမ်းချစ်တယ် … မ ရယ် …” “ချစ်တာပေါ့ … မောင်ရယ် … ချစ်တာပေါ့ …” “မ … ကျွန်တော် … မ ကို … အရမ်းချစ်လို့ ရပြီလားဟင် …” “အို …” ကျွန်မလေ … မောင့်အမေးကို … မဖြေနိုင်အောင် … ရှက်ရွံ့သွားပါတယ် … မောင် တော်တော်ဆိုးတယ်ရှင် … အပျိုစင်လေးကို … ဒါမျိုးမေးစရာလားလို့ … ချစ်လွန်းလို့ … လက်ထပ်လိုက်တာပေါ့ … မောင် ပြုသမျှ … နုမယ့် … တို့ပါကွယ် … ကျွန်မလေ … ရှက်လွန်းလို့ … မောင့်မျက်နှာကို မကြည့်ရဲတော့ဘူး … ခေါင်းလေး စောင်းကာ … မျက်စိလေးကို မှိတ်ပြီး … ဆက်ချစ်လာမယ့် … မောင့်အနမ်းတွေကို … စောင့်နေလိုက်ပါတယ် … ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် … ဝန်ခံခြင်းလို့ … မောင်မှတ်ယူလိုက်တယ် ထင်ပါတယ် … ခေါင်းလေးစောင်းသွားတဲ့ … ကျွန်မရဲ့ လည်တိုင်ဝင်းဝင်းလေးကို … နမ်းပါတယ် … အို … မောင် ရယ် … ဘယ်လိုများ နမ်းလိုက်တာလဲဟင် … ကျွန်မ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထသွားပါတယ် … မောင်လေ … အနမ်းတွေက .. တဖြေးဖြေး အောက်ဆင်း လာပါတယ် … အို … မျက်နှာသုတ်ပဝါလေးက … တင်းတင်းစီးထားတော့ … ရင်နှစ်မွှာက … မို့မောက်နေပါတယ် … မောင် … ကျွန်မရဲ့ … ရင်နှစ်မွှာကြားကို … စနမ်းပါတယ် … အို … ရှင် … သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေလာတဲ့ … ကျွန်မရဲ့ … ရွှေရင်မို့မို့လေးက … မောင့်အနမ်းတွေကြောင့် … ပိုပြီး ကော့လာပါတယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်ခေါင်းကို … တွန်းဖယ်လိုက်ချင်ပေမယ့် … မတွန်းဖယ်ရက်ပါဘူး … ဆွဲအားတစ်ခုက … မောင်ဆက်နမ်းဖို့ … တွန်းအားပေးနေပါတယ် …
“မ … မောင် … ဖြည်လိုက်တော့မယ်နော် …” “အို … ဟင့်” မောင်ပေါ့ … ကျွန်မရဲ့ … အဖြေတောင် မစောင့်တော့ဘူး … မျက်နှာသုတ်ပဝါလေးကို … ဖြည် လိုက်ပါတယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်လက်ကလေးကို … အမြန်ဖမ်းပြီး … “မောင်က … တို့ကို … တကယ်ချစ်တာပါနော် …” “မေးနေစရာလိုသေးလား … မ ရယ် … ချစ်တာပေါ့ … အရမ်းချစ်တာပေါ့ …” “တို့လည်း … မောင့်ကို … အရမ်းချစ်တယ်ကွယ် … မောင် … တို့ကို … ပစ်မသွားရဘူးနော်” “ပစ်သွားစရာ လား … မ ရယ် … ဒီလောက်ချစ်တဲ့ဟာကို …” “အင်းပါ … မောင်ရယ် … တို့ ယုံပါတယ် …” ကျွန်မလေ … မောင် ဆက်နမ်းဖို့ … လိုက်လျောလိုက်ပါတယ် … သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်ဦးသူ … နမ်းချင်သလိုသာ နမ်းပါစေတော့ … မောင်ပျော်ရင် … ကျွန်မပျော်တာမို့ … မောင်လိုချင်တာ … ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ် … ကျွန်မလေ … မျက်စိလေး မှိတ်ပြီး … ရင်နှစ်မွှာကို … မောင်နမ်းမယ့် အနမ်းတွေကို … ရင်ခုန်စွာနဲ့ … စောင့်နေလိုက်ပါတယ် … မျက်နှာသုတ်ပဝါလေးက … လှပ်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး … ကျွန်မရဲ့ … အလှတရားတွေ … ပေါ်လာပါတယ် … ဖြူဝင်းတဲ့ … ရင်နှစ်မွှာက … အလုံးတူ ဝိုင်းစက်နေပြီး … အလယ်မှာ … ပတ္တမြား ခဲလေးက … တင်တယ်ဆိုရုံလေးတင်ထားတာပါ … ကျွန်မရဲ့ … ရင်အလှကို ကြည့်ပြီး … မောင်မနေနိုင်တော့ပါဘူးရှင် …
“လှလိုက်တာ … မ ရယ် … အရမ်းလှတယ် …” “အို … မောင်ရယ် …” မောင် … ကျွန်မ ရင်သားတွေကို … မက်မက်မောမောနဲ့ … ကြည့်ပြီး … အရမ်းကို သဘောတွေကျနေပါတယ်ရှင် … “မောင်ရယ် … အဲဒီလိုမျိုးကြီး … စိုက်မကြည့်နဲ့လေကွာ … အရမ်းရှက်ပါတယ်ဆိုနေမှ … ဟင့်” “လက်တွေ မကာနဲ့လေ … မရယ် … ဖြေးဖြေးလေး ကိုင်မယ်နော် …” ကျွန်မ ကာထားတဲ့ … လက်လေးတွေကို … ဆွဲဖယ်လိုက်တယ် … ရှက်တာရယ် … ကြောက်တာရယ်ကြောင့် … မဖယ်ပေးရဲပါဘူး … မောင်လေ … ကျွန်မ လက်ကလေးကို နမ်းလိုက်တယ် … “ဖယ်ပေးပါနော် … မရယ် … မောင်ကိုင်ချင်လို့ပါ …” “အို … မောင်ရယ် … ကျွန်မလေ … မျက်စိလေး မှိတ်ပြီး … ကျွန်မလက်ကို ဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ် … သိပ်ချစ်လွန်းတဲ့ မောင့်ကို … လိုက်လျောရမှာပေါ့ရှင် … မောင် … ကျွန်မ ရင်သားအိအိလေးကို … ဖွဖွလေး လာကိုင်ပါတယ် … ကျွန်မလေ … တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … အသဲယားလိုက်တာရှင် … မောင် … ကျွန်မရင်တွေ ကို … ခြေမွပစ်မှာလားဟင် … “မောင် … ဖြေးဖြေးနော် …”
“အင်းပါ … မရယ် … မရင်သားတွေက … သစ်တော်သီးလောက်ရှိတယ်နော် …” “အို … မောင်နော် … မပြောနဲ့ကွာ … တို့ နားရှက်တယ်” “တင်းနေတာပဲနော် …” “ဟိတ် … မောင် … ပြောလေဆိုးလေပါလား” “မောင် … ညှစ်ချင်တယ်ကွာ …” “ဟင့်အင်း … နော်” မောင်လေ … ကျွန်မရင်သားတွေကို … ဖွဖွလေး နယ်ပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်မ … အသွေးအသားတွေ ဗြောင်းဆန်သွားတာပဲရှင် … “အို … ဟင့် …” ရင်နှစ်မွှာကို … မောင် စိတ်ကြိုက် … ကိုင်တော့လေ … ကျွန်မ … ရင်တွေ ပူလာပါတယ် … ကြက်သီးတွေက တဖြန်းဖြန်းထလို့ … တကိုယ် လုံးလည်း … ထွန့်ထွန့်လူးနေတာပဲ … မောင်လေ … ကျွန်မ … ရင်နှစ်မွှာကို … နမ်းတော့တာပဲရှင် … မောင့်ရဲ့ မွတ်သိပ်တဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် … ကျွန်မ ရင် တွေ … အရမ်းခုန်ပြီး … ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲ လှိုက်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ် … အို … မောင်ရယ် … မောင်လေ … ကျွန်မ … ရင်သားထိပ်ဖျား သေးသေးလေး ကို … အတင်းစုပ်တော့ … ကျွန်မ … နှုတ်ခမ်းလေးက … မမျိုသိပ်နိုင်တော့ဘူးရှင့် … “အို … ဟင့် …” မောင်လေ … ကျွန်မ ရင်သားတစ်ဖက်ကို နမ်းတယ် … တစ်ဖက်ကလည်း … ဆော့ကစားတယ် … သိပ်ဆိုးတယ် မောင်ရယ် … အို … ဖြေးဖြေး စို့ပါကွယ် … တို့ … မောတယ်ကွာ … မနေတတ်ဘူးကွယ် … မောင် ကျွန်မ ရင်သားကို … ဖွဖွလေး နယ်နေရင်း … ထိပ်ဖျားလေးကို … လက်မနဲ့ လက်ညှိုး … ညှပ်ပြီး .. ချေလိုက်ပါတယ် … အစေ့လေးက … သေးသေးလေးမို့ … မောင်ကိုင်ရခက်နေပါတယ် … မောင်လေ … မရမက … အတင်းညှစ်ပါတယ် …
“အ … မောင် … အရမ်းမညှစ်နဲ့ကွာ … တို့ … မနေတတ်ဘူး .. အရမ်းယားတယ်ကွာ … အို … ဟင့် …” “ဟင့် … မောင်ကွာ … အာ … ရှီး … ဟင့် … ကျွတ် … ကျွတ် … ရှီးး … “ ကျွန်မ ဗိုက်ထဲက … ကလီစာတွေ ဗြောင်းဆန်ကုန်ပြီလား မသိပါဘူးရှင် … အတင်း နမ်းနေတဲ့ … မောင့်ခေါင်းကို … တွန်းဖယ်ရမယ့် အစား … ကျွန်မလက်တွေက … မောင့်ဆံပင်တွေကြားထဲ … ထိုးထည့်ပြီး … အတင်းဖိပေးနေပါတယ် … အောက်က ရင်နှစ်မွှာကလည်း … ကော့ကော့ပေး နေပါတယ် … ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲဟင် … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ထိန်းချုပ်လို့မရတော့အောင် … မောင့်ကို ချစ်မိသွားတာလား မသိတော့ပါဘူးရှင် …
“မောင် … ရယ် … တော်ပါတော့နော် … တို့ ရင်တွေ အရမ်းမောနေပြီ …” မောင်လေ … ကျွန်မကို … စကားတောင် ပြန်မထူးတော့ဘူး … အဆော့မက်တဲ့ ကလေးလိုပဲ … အရုပ်သစ်လေးရတော့ … ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ဖြစ်နေပြီ … နူးအိတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ရင်နှစ်မွှာက … မောင့်အနမ်းတွေ … မောင့်အဆုပ်အညှစ်လေး တွေ … မောင့်ဝင်သက်ထွက်သက်လေကြောင့် … အရမ်းကို … တင်းပြီး … ကြွတက်မို့မောက်နေပါတယ် … မောင်လေ … ကျွန်မ ရင်သားတွေကို … နမ်းနေ ရင်းက … အနမ်းတွေက … အောက်ကို ရွေ့လာပါတယ် … ကျွန်မဗိုက်လေးကို နမ်းတယ် … ချက်ကလေးနားရောက်တော့ … လျှာလေးနဲ့ ကလိပါတယ် …
“အို … မောင့် … “ မောင့်အနမ်းတွေက … ကျွန်မ ဗိုက်လေးကို … လှိုင်းထစေပါတယ် … ချက်နားကလေ … အောက်ကိုရွေ့တော့လေ … ကျွန်မ … ရှက်လိုက် တာရှင် … မောင့်ကိုလေ … ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ပြောပြော … အပျိုစင်လေးမို့ … အရမ်းရှက်မိပါတယ် မောင်ရယ် … တသက်လုံး … လုံလုံခြုံခြုံ ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ … ကျွန်မရဲ့ ရတနာရွှေကြုပ်လေးက … ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှာ … ဖောင်းကားနေပါတယ် … အို … ဟင့် … မောင် … ကျွန်မ ပန်းလေးကို … ကြည့်နေတာပေါ့လေ … ကျွန်မ ပေါင်လေး နှစ်ဖက်ကို … လိမ်ကျစ်ပြီး … နောက်ဆုံး ခံတပ်ကို … ကာကွယ်နေပါတယ် … မောင်လေ … ကျွန်မပေါင်လေး ကို … ဖြဲကြည့်တယ် … မရဘူး … မောင်ရယ် … တို့ … အရမ်းရှက်တယ် … အရမ်းကြောက်တယ်ကွာ … မောင်လေ … ဆီးခုံမို့မို့လေးပေါ်က … အမွှေးလေး တွေကို … မြင်သွားပြီပေါ့ … မောင် … အမွှေးလေးတွေကို … နမ်းလိုက်ပါတယ် … မြတ်မြတ်နိုးနိုးပေါ့ရှင် … မောင်က … စိတ်ရှည်ပါတယ် … ကျွန်မ ကြောက်နေတာသိနေတော့ … ပေါင်လေးကို … နမ်းတယ် … ခြေသလုံးလေးကို … နမ်းတယ် … ခြေဖမိုးလေးကို နမ်းတယ် …
“မောင် … နော် … ခြေထောက်တွေ လျှောက်မနမ်းနဲ့ကွာ … မောင် ဘုန်းနိမ့်လိမ့်မယ် … ဟိတ် … အာ” “မောင် … ရယ် …” မောင်ရယ်လို့ပဲ … ကျွန်မ ပြော နိုင်ပါတော့တယ် … ကျွန်မ ခြေမလေးကို … မောင်ပေါ့ … သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး … စုပ်နေပါတယ် … ကျွန်မလေ … ကျွန်မ … မောင့်ကို … အရမ်းချစ်သွား တယ် … မောင့်ရဲ့ အပြုအစုတွေကြောင့် … ကျွန်မ ကြွေသွားပြီကွယ် … ကဲ … မောင်ရယ် … မောင် ဆွတ်ခူးချင်တဲ့ … တို့ရဲ့ အပျိုစင်ပန်းလေးကို … ယူပါ တော့ … ကျွန်မလေ … လိမ်ကျစ်နေတဲ့ … ပေါင်လေး နှစ်ချောင်းကို … ဖြေပေးလိုက်တယ် … ဆွတ်ခူးလိုက်ပါ … မောင်ရယ် … ဆွတ်ခူးလိုက်ပါ … ကျွန်မ ပေါင်နှစ်ချောင်း … အားလျော့သွားတာ … မောင်သိတယ် … လူပါးလေး မောင်က … အနမ်းတွေ ပေးရင်း အပေါ်ပြန်တက်လာတယ် … ကျွန်မလေ … အသဲ ယားလွန်းလို့ … မျက်စိလေး မှိတ်ထားလိုက်ပါတယ် … မောင်လေ … ပေါင်ကြားထဲ … မျက်နှာ … ဘယ်လို ရောက်သွားလဲ မသိပါဘူး … ကျွန်မက … ဟ ပေးလိုက်တာလား … မောင်က … ဖြဲပြီး ဝင်လာတား … “လှလိုက်တာ မ … ရယ် … အရမ်းလှတာပဲ …”
“အို … မောင်နော် …” ကျွန်မ … ရွှေကြုပ်လေးကို … မောင် … တို့ကြည့်တယ် … ထိကြည့်တယ် … အမွှေးနုနုလေးတွေ … သဘောကျလွန်းလို့ … နမ်းတယ် … ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ … ကျွန်မ ပန်းလေးကို … နမ်းတယ် … အရမ်းရှက်ပေမယ့် … မောင့်ကို မတားနိုင်တော့ပါဘူး … မောင့်ကို တားမယ့် … နှုတ်ခမ်း လေးက … အားစေးထည့်သလို … နှုတ်ပိတ်နေပါတယ် … မောင်လုပ်ချင်တာသာ လုပ်ပါတော့ … မောင်ရယ် … မောင်လေ … ကျွန်မ … အတွင်းခံလေးကို … ဘေးကပ်လိုက်တယ် … ပန်းလေးပေါ်က … အတွင်းခံလေးက … ဘေးကပ်သွားပြီး … ကျွန်မ ပန်းလေးကို … ဖြဲကြည့်တယ် … ရှက်လိုက်တာ မောင်ရယ် … ရှက်လိုက်တာ … ကျွန်မလေ … ကျွန်မ … မျက်စိကို မှိတ်ပြီး … ခေါင်းအုံး အဖျားလေးကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် … ဆွဲထားရင်း … အရှက်ဖြေနေရ တယ် … “မ … အဖုတ်လေးက … အရမ်းလှတယ်ကွာ …” “အို … မောင်နော် ဟင့် … မကြည့်နဲ့တော့ကွာ … အရမ်းရှက်လာပြီ …” “သုံးရောင်ခြယ်လေးနော် … မောင်နမ်းချင်တယ်ကွာ …” ရှက်လိုက်တာမောင်ရယ် … ဘာသုံးရောင်ခြယ်လဲ … မသိပါဘူး … ကျွန်မ ဒီအရွယ်ထိ … ကိုယ့်ဟာကိုယ် သေချာမ ကြည့်ဖူးတော့ … မောင် ဘာပြောမှန်းနားမလည်ပါဘူး …
“အာ … ဟေ့အေး … နမ်းရဘူးနော် … မောင် …” “ဟာ …. အား … အား … အား … “ မောင်လေ … ကျွန်မရဲ့ … ပန်းလေး အဝကို နမ်းလိုက်ပါတယ် … မရွံ ဘူးလား မောင်ရယ် … မောင့်ကိုလေ … မတားဆီးနိုင်တော့ဘူး … အထိအတွေ့က … အရမ်းခံရတယ် မောင်ရယ် … မောင့်ရဲ့ လျှာဖျားလေးနဲ့ … ကျွန်မ … ပန်းလေးနုနုကို … ထိလိုက်တာ … အရမ်းကောင်းတာပဲရှင် … ရင်ထဲမှာ … ဗုံးပေါက်သလိုပဲ … ဝုန်းကနဲ … သွေးတွေ ဆူကြွလာပါတယ် … အို … မောင်ရယ် … ဟင့် … “အား … အား … အား … ရှီး … “ ကျွန်မ ရူးပြီ … မောင်ရယ် … အသွေးအသားတွေက … ပွက်ပွက်ဆူလောက်အောင် … မောင်နမ်းတတ်တယ် ကွယ် … မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေအောက်မှာ … ကျွန်မလေ … ဘယ်လိုနေရမလဲမသိတော့ပါဘူးရှင် … ကောင်းလွန်းတော့ ခံရခက်တယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ … မောင် … ရင်သားလေးတွေကို နမ်းတုန်းကနဲ့ … ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးရှင် … အထိအတွေ့က … ကျွန်မကိုလေ … ဟိုးမိုးကောင်းကင်ဆီ … ခေါ်သွားပါတယ် …
အေးကနဲ သိမ့်ကနဲ … မြင့်လိုက် နိမ့်လိုက်နဲ့ … ရင်တုန်လွန်းလို့ … ကျွန်မ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … အတင်းဖိကိုက်ထားပြီး … မောင့်အနမ်းတွေကို … ခံ နေရရှာတယ် … နမ်းပါမောင်ရယ် … နမ်းပါ … သိပ်ချစ်ရလွန်းတဲ့ … ချစ်ဦးသူ မောင့်ကို … အရာရာပေးဆပ်ထားပါတယ် … မောင်လိုချင်တာ ယူပါလေ … မောင်လေ … ကျွန်မ ပန်းလေးထဲက … ပန်းနုရောင် ပန်းဖတ်လေး နှစ်ဖတ်ကို … လျှာနဲ့ယက်လိုက်တယ် … အာ … ဟာ … ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် … ကောင်းလိုက်တာ … နူးညံ့တဲ့ ပန်းဖတ်လေးတွေကို … မောင့်လျှာကြမ်းကြမ်းနဲ့ … ယက်ပေးတော့ … ကျွန်မလေ … ကျွန်မ … ရမက်တွေ ထန်ကုန်တာပေါ့ … ဟိုးအရင်တုန်းက … အပျိုလေးဆိုတော့ … ကာမအရသာဆိုတာ ဘယ်သိပါ့မလဲရှင် … မောင်နဲ့ လက်ထပ်မှ … မောင့်အနမ်းတွေအောက်မှာ … ဒီအရသာ ကို … စသိလာပါတယ် … ကာမဆန္ဒက … ပြောမပြတတ်အောင် … ထကြွနေလို့ … ကျွန်မလေ … မရှက်နိုင်တော့ပါဘူး … အတင်းပဲ … ပန်းလေးကို ကော့ ကော့ပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်မတင်လေးတွေ … မွေ့ယာကနေ လွတ်သွားလောက်အောင် … ကော့ပစ်လိုက်တာ … မောင် နမ်းတာ အရမ်းကောင်းလို့ရှင့် … ရှက်ပေမယ့် မနေနိုင်တော့ … မောင်ရယ် … ပန်းလေးထဲက … ယားလိုက်တာမှ … အရမ်းပဲ … အထဲကနေ … မောင့်လျှာလေးများ … တိုးဝင်လာမလား … အတင်း ဖမ်းပြီး စုပ်နေတာ … ရှက်လိုက်တာကွယ် … မောင်ရယ် …
“အို … အား … အား …” နမ်းတတ်လိုက်တာ မောင်ရယ် … နမ်းတတ်လိုက်တာ … ကျွန်မရဲ့ … ငြီးသံတွေက … ထိန်းမရအောင် … ထွက်နေပါတယ် … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … အတင်းဖိကြိတ်ထားပြီး … မောင်ပေးတဲ့ချစ်အရသာက … ကောင်းလွန်းတော့ … ဖင်လေးကို … ကော့လိုက် … စကောဝိုင်းလို … ဝေ့ကနဲ … ကော့လိုက်နဲ့ … မောင့်အနမ်းအောက်က … လွတ်လေမလား … ရုန်းကြည့်မိပါတယ် … မောင်ကလည်း မောင်ပဲလေ … ကျွန်မ အပေါ်ကို ကော့ ပေးရင် … မောင့်လျှာလေးက … အပေါ်ကို လိုက်လာပါတယ် … အောက်ကိုကျသွားရင် … အောက်ကို လိုက်လာတယ် … ဘယ်ကိုဝိုက်ရင်လည်း … ပါလာ တာပဲ … ကော်နဲ့များ ကပ်ထားသလား မောင်ရယ် … ခွာမရတော့ဘူး … “အို … ဟင့် … ဟင့် … အရမ်းထိတယ် မောင်ရယ် … တို့ မခံနိုင်ဘူး … အား ရှီး … အား … အား … ရှီး” မောင်လေ … ကျွန်မ ရတာဖူးလေးကို ဘယ်လိုများတွေ့သွားလဲမသိပါဘူး … အစေ့သေးသေးလေးကို … အတင်းပဲ ဖိပြီးယက်တယ် … “ဟင့်အင်းကွယ် … အို … ရှီး … မခံနိုင်တော့ဘူး … မခံနိုင်တော့ဘူး … တော်ပါတော့ မောင်ရယ် … အိုး … ဟာ … ဟာ” ကျွန်မ ခံရခက်မှန်းသိလေ … မောင် ပိုနမ်းလေပဲ … တားလို့လည်း မရတော့ဘူးလေ … “အို … မောင် … တော် … တော်ပြီနော် … တို့ … သေးထွက်တော့မယ် …” “ဟိတ် …. ဖယ်ပါကွာ … ဟင့် … ဟင့် …” ကျွန်မ ပန်းလေးထဲကလေ … ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တော့ … ယားလွန်းလို့ သေးထွက်ချင်သလို … ဖြစ်လာပါတယ် … မောင်ရယ် … ဖယ်လိုက်ပါ ကွာ … တော်ကြာ … ရှူးရှူးတွေ ထွက်ကျကုန်မှ … မောင့်မျက်နှာတွေ ပေကုန်အုံးမယ် …
“မောင်ရေ … အား … အား … အား … မရတော့ဘူး … တို့ … မ ထိန်းနိုင်တော့ဘူး … ရှူရှူးတွေ … ထွက်ကုန်ပြီ … ထွက်ကုန်ပြီ … ဟင့် … ဟင့် … ဟင့် “ ကျွန်မစိတ်တွေ … ထိန်းမရအောင် … ဟိုးအဝေးကြီးကို ပျံတက် သွားပါတယ် … ထိပ်ဆုံးလည်းရောက်ရော … ဝုန်းကနဲ … ပြုတ်ကျလာတာ … ရင်ထဲ အေးကနဲ … ဖြစ်သွားတာပဲရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … သွေးကြော လေးတွေက … တဆစ်ဆစ်ယားနေတဲ့ … ဝေဒနာလေး … တစိမ့်စိမ့်နဲ့ … ပျောက်သွားတာ … သိပ်ကောင်းတာပဲမောင်ရယ် … မောင် ပေးတဲ့ ချစ်အရသာက … တော်တော်ကောင်းတာပဲရှင် … သိပ်ချစ်သွားပြီ … မောင်ရယ် … သိပ်ချစ်သွားပြီ … “ဟင့် … မောင် အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ …” “အရမ်းကောင်းတယ်မှတ် လားဟင် …” “သိဘူးကွာ … ရင်ထဲမှာ … အရမ်းမောနေတာပဲ သိတယ် …” ဟုတ်ပါတယ်ရှင် … မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေကြောင့် … ကျွန်မ … ရင်တွေ တလှပ်လှပ်ဖြစ်နေပြီး … တကိုယ်လုံး ရှိသမျှအားတွေကို … မောင် စုပ်ယူသွားပါတယ် … သိပ်ဆိုးတာပဲ မောင်ရယ် … မောင်လေ … ကျွန်မ ပန်းလေးထဲက … အရည်တွေကို … အတင်းပဲ စုပ်ယူပြီး … မျိုချလိုက်တယ် … မောင့်လျှာကြီးနဲ့ … အတင်းပိတ်ထားပြီး … အရည်တွေကို … အကုန်ယက်ပစ်လိုက်ပါတယ် … “မောင်ရယ် … မရွံဘူးလားဟင် …” “မောင် … သိပ်ချစ်တာ ယုံပြီလား … မ ကို ချစ်လွန်းလို့ … မ အရည်တွေကို … မရွံပါဘူး … ချိုတောင် ချိုသေးတယ် …” “ဟင့် … မောင်ရယ် … အရမ်းအားနာတာပဲ … ဘာလို့ အကုန်စုပ်ပစ်လိုက်တာလဲ … မောင် အကုန်စုပ်ပစ်လိုက်တာ … အားတောင်မရှိတော့ဘူး … မောင် ရယ် … တို့ကို … ဖက်ထားပါလားဟင် …”
“မောင့်ကို ချစ်တယ်မှတ်လားဟင် …” “သိပ်ချစ်တာပေါ့ … မောင်ရယ် … သိပ်ချစ်တာပေါ့ …” “မောင့်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် … မောင် အရမ်းချစ်ချင်လာပြီကွာ … ဟိုဟာလေးကို ချွတ်လိုက်တော့နော် …” “ခဏလေးပါ မောင်ရယ် … တို့ အားမရှိလို့ … ခဏလေး … မှေးနေတယ် …” “အင်း …” မောင် … ကျွန်မ နှဖူးလေးကို … နမ်းလိုက်ပြီး … အတွင်းခံလေးကို … ချွတ်လိုက်သည် … “အို … မောင်နော် … ဟင့်” ကျွန်မ လေ … ရှက်လွန်းလို့ … အတွင်းခံလေးကို … လိုက်ဆွဲနေမိပါတယ်ရှင် … ရှက်လိုက်တာ အရမ်းပေါ့ … အပျိုလေးဆိုတော့ … မရဲဘူးရှင့် … မောင်ကို့ သိပ် ချစ်ပေမယ့် … တကယ်တမ်း … လိုက်လျောဖို့ကျတော့ … နှမြောနေမိသည် … ကျွန်မရဲ့ … အပျိုစင်ပန်းဦးလေးကို … မောင့်ကို … ခူးခွင့်ပေးလိုက်ပေမယ့် … ရှက်လိုက်တာရှင် … မောင်လေ … အားမရှိတဲ့ … တို့ကို … အနိုင်ကျင့်တယ် … အတွင်းခံလေးက … ပေါင်လေးတစ်လျှောက် … လိပ်ပြီး … ကျွတ်သွား တယ် … “အရမ်း … ချစ်တယ် … မရယ် … အရမ်းချစ်တယ် …” မောင်လေ … ကျွန်မ မျက်နှာကို … အတင်းနမ်းတော့တာပဲရှင် … လည်တိုင်လေးကို … နမ်း တော့ … ယားလွန်းလို့ … အောက်က … ဟောင်းလောင်း ဖြစ်နေတာ … မေ့သွားတယ် … မောင်လေ … သူ့အင်္ကျီတွေလည်း ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … မောင် ဘောင်းဘီကိုချွတ်တော့ … ကျွန်မ … မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်တယ် … မောင့်ရဲ့ ဟိုဟာကို … မကြည့်ရဲဘူးရှင့် … ရှက်လိုက်တာရှင် … ယောက်ျားလေးတစ် ယောက်နဲ့ တစ်ခါမှ … မနေဖူးပေမယ့် …
ဖိုမကိစ္စတွေကိုတော့ … ကျွန်မ … သိတန်သလောက် သိထားပါတယ် … မောင့်ရဲ့ … ပေါင်ကြားထဲက ပစ္စည်းနဲ့ … ကျွန်မ ပန်းလေးထဲကို … ထည့်လိုက်ရင် … အို ဆန့်ပါ့မလားရှင် … တော်ကြာ မဆန့်လို့ … ကွဲပြဲသွားမှရှင့် … မသိတော့ပါဘူးရှင် … မောင်ချစ်သမျှ … လိုက်လျောလိုက်တော့မယ် … ဟင့် … “အို အို …” မောင်လေ … ကျွန်မပေါင်ကို ကားလိုက်ပါတယ် … ရှက်လိုက်တာ … မောင်ရယ် … ပေါင်လေးကို … အတင်း ပြန်စိတယ် … မောင်က ပြန်ကားတယ် … ကျွန်မက ပြန်စိတယ် … ဒီလိုကားလိုက် … စိလိုက်နဲ့ … ကျွန်မရင်တွေ တုန်လိုက်တာရှင် … နောက်ဆုံးတော့ … မောင့်ကို အရှုံးပေးလိုက်ပါတယ် … မောင်လေ … ကျွန်မကို … ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေက … အရမ်းကို … ရမက်ထန်နေပါတယ် … သားကောင်ကို စားခါနီးကြည့်တဲ့ … ကျားတစ်ကောင်ရဲ့ အကြည့်မျိုးဆို … ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်မျက်လုံးတွေကို … ကြည့်ပြီး … ကြောက်လာပါတယ် … သူကတော့ … ပျော်နေမှာပေါ့ … ကျွန်မကတော့ ကြောက်နေပါတယ် … မောင် သူ့အင်္ကျီတွေကို … ချွတ်လိုက်ပါတယ် … မောင့်ရဲ့ ဗလတောင့်တောင့် ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးက … ကျွန်မကို လှန့်နေတာလားဟင် … မောင့်ရဲ့ဗိုက်မှာ … ဗယ်လီတုံးလေးတွေက အစီအရီ … ဟင့် … ကြောက်လာပြီမောင်ရယ် … ကျွန်မလေ … ဆက်မကြည့်ရဲတော့ဘူး … မောင် ဘောင်းဘီဇစ်ကို ကိုင်လိုက်တော့ … မျက်စိလေးမှိတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဒါပေမယ့် … နားထဲမှာ ကြားလိုက်တာက … ဇစ်ဖြုတ်တဲ့အသံလေး … ဇွိကနဲ ကြားလိုက်ရတာ … ရင်တုန်သွားတယ် … ဟင့် ဟင့် … ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင်ဘဝလေး … အဆုံးသတ်မယ့်အချိန်ကို နီးလာပြီပေါ့ …
“မ … ကြောက်နေတာလားဟင် “ “အို …” ကျွန်မလေ … ဘာအသံမထွက်ရဲဘူး … “မကြောက်နဲ့နော် … မ … မနာပါဘူး မရယ် …” “ဟင့် … ဟာ …. ဟာ … ရှီး” အိုး … မောင်လေ … သူ့ပစ္စည်းကြီးနဲ့ … ကျွန်မပန်းလေးကို လာထိတယ် … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး တုန်သွားတာပဲရှင် … မောင့်ရဲ့ ထိပ်ဖျားက … နူးညံ့ပါ တယ် … ဒါပေမယ့် မာတယ် … မောင်လေ … အရမ်းနူးညံ့တဲ့ ပန်းလေးအဝကို တေ့လိုက်ပါတယ် … “ဟာ … ဟင့်” အထိအတွေ့က မပြောပြတတ်အောင်ပဲ ရှင် … ကျွန်မလေ … ရှက်လည်းရှက် … ကြောက်လည်း ကြောက်တော့ … ကျွန်မပန်းလေးကို … အတင်းညှစ်ထားလိုက်ပါတယ် … မောင်လေ … တေ့သာ တေ့ထားတယ် … သွင်းမရဘူးရှင့် … မောင် … က စိတ်ကြီးတယ် ထင်တယ် … အတင်းပဲ … ဟိုထိုး … ဒီထိုးလုပ်တယ် … “အို … မောင်နော် … ဟင့်အင်း ကွာ … ဟင့်အင်း …” “အို … မောင် … မောင့် …” မောင်လေ … ကျွန်မပန်းလေးကို … ထိုးလို့လည်းမရတော့ … အပေါ်အောက် … လျှောက်ပွတ်တယ်ရှင့် … ခံရခက်လိုက်တာရှင် … အို … ဟင့် … ကျွန်မ ပန်းဖူးလေးကို … မောင့်ပစ္စည်းကြီးနဲ့ … လာလာထိတယ် … အား … ခံရခက်လိုက်တာရှင် … ပန်းလေးက အ ထည့်သာမခံတာ … အထဲမှာ … အတင်းညှစ်ညှစ်နေပြီး … ပန်းဝတ်ရည်တွေက … တစိမ့်စိမ့် ယိုကျနေပါတယ် … ပန်းလေးထဲကလည်း … အရမ်းယားလာ ပါတယ် … ချစ်ချင်လည်း … ချစ်လိုက်ပါတော့ မောင်ရယ် … ကျွန်မလေ … ပေါင်လေးကို … ပိုပြီး ကားပေးလိုက်တယ် … မောင်လေ … နည်းနည်းလေး ဟ ပေးတာနဲ့ … အတင်းပဲ … ထိုးထည့်တယ် … “အား … နာတယ် … မောင်ရယ် … နာတယ်…” ပြွတ်ကနဲ … မောင့်ထိပ်ဖျားလေး … ဝင်လာပါတယ် … ကြီး လိုက်တာရှင် … ပန်းလေးက ကျဉ်းတော့ … နာတယ်ရှင့် … “ဟား … မရယ် … ဝင်သွားပြီ … ဝင်သွားပြီ” မောင်ရဲ့ … နှစ်ထောင်းအားရသံက … နှစ်ကိုယ်ကြားပြောတာဆိုတော့ …
ကျွန်မကို … ပိုပြီး ရမက်ထန်စေပါတယ် … “အား … မောင် … မောင် … ပြန်ထုတ်ကွာ … ထပ်မထည့်နဲ့တော့ … ဟင့် … နာတယ် … နာတယ် … ဟီး” မောင်လေ … ကျွန်မကို … မညှာတော့ဘူး … သူ့ဟာက … တထစ်ချင်း ဝင်ချလာတာ … အရမ်းကျဉ်းတဲ့ … ပန်းလေးထဲက အသားစိုင်တွေကို … ထိုးခွဲပြီး … ဝင်လာပါတယ် … ကြပ်လိုက်တာရှင် … ကြပ်လိုက်တာ … နာလိုက်တာလည်း … အရမ်းပဲ … အသားနုလေးတွေကို … ပွတ်တိုက်သွားတဲ့ … မောင့်ရဲ့ ဟာက … သံချောင်းလောက်ကို မာလိုက်တာရှင် … “အား … တော်ပါတော့ … မောင်ရယ် … တို့မခံနိုင်ဘူး … ဟင့် … အရမ်း နာတယ်ကွာ …” “ခဏလေးပါ … မရယ် … ခဏလေးပါ … “ ကျွန်မလေ … ဇောချွေးလေးတွေ ပြန်လာပါတယ် … နာလွန်းတော့ အောက်ကနေ … လူးလှိမ့် နေတာပဲရှင် … မောင် ကျွန်မ … ရင်သားတွေကို … လာနမ်းတယ် … လည်တိုင်လေးတွေကို … နမ်းတယ် … လက်လေးက … ရင်သားတွေကို … နယ်ပေး တယ် … အို … ဟင့် … အောက်ကလည်း နာ … အပေါ်ကလည်း ယား … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး … မောင့်ရင်ခွင်အောက်မှာ … လူးလိမ့်နေတာပဲရှင် … မောင် လေ … ကျွန်မ ရင်သားထိပ်ဖျားလေးကို … ညှစ်ပြီး ချေပေးပါတယ် … အို … ကောင်းလိုက်တာရှင် … နာကျင်တာတွေ မေ့ပျောက်သွားအောင် … မောင်လုပ် တတ်တယ်နော် … စောက်ခေါင်းလေးထဲ နစ်ဝင်နေတဲ့ … မောင့်ဟာကြီးကိုတောင်မေ့သွားတယ် … မောင်လေ … သူ့ဟာကို … အထဲမှာ မွှေနေတယ် … ထက်အောက် ဘယ်ညာ … ဖမ်းမရ … ညှစ်မရအောင် … မွှေ့ယမ်းနေတော့ … ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ထူပူသွားတာပဲရှင် … ရင်ထဲမှာလည်း … လှိုက်ကနဲ ဖိုက နဲ … အို … မောင်ရယ် … ချစ်တယ် မောင်ရယ် … ချစ်တယ် …
မောင်လေ … သူ့ခါးကို ဆတ်ကနဲ ဖိချပစ်လိုက်တော့ … မောင့်ဒုတ်က … ပန်းလေးထဲ … အတင်းဝင်ချလာပါတယ် … မောင်လေ … ကျွန်မ ပန်းလေးထဲက … တစ်ခုခုကို … ထိုးခွဲပစ်လိုက်တယ် … ဆစ်ကနဲ … နာကျင်မှုက … အသည်းခိုက်အောင် … နာလိုက်တာရှင် … “အား … နာတယ် … နာတယ် … ဟင့် … ဟီး … မောင် အရမ်းရက်စက်တယ်” “အရမ်းနာသွားလား မရယ် … မငိုနဲ့နော် … တိတ် တိတ် … မ အပျိုမြှေးလေး ပေါက်သွားပြီ” “အို … ဟင့် … ဟီး …” ကျွန်မ … အပျိုမြှေးလေး ပေါက်သွားပြီတဲ့ … ဟင့် … နာလိုက်တာရှင် … ဒါဆို … ကျွန်မ … အပျိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ … မောင်လေ … ကျွန်မ အပျိုပန်း လေးကို … ဆွတ်ခူးသွားပြီ … နာလွန်းလို့ … ရုန်းကန်ပစ်နေတဲ့ ကျွန်မကို … အနမ်းတွေ တရစပ် ပေးတော့တာပဲ … ကျွန်မလေ … ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ … မျက်ရည်လေးတွေ စီးကျလာပါတယ် … “မငိုပါနဲ့ … မ ရယ် … မောင်က ချစ်လွန်းလို့ပါ” “ဟင့် ဟင့် …” ငိုနေတဲ့ ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းရင်း … မောင်လေ … အဆုံးထိထိုးထည့်ထားတဲ့ … မောင့်ဒုတ်ကို … ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ် … “ဟင့် … ဟင့် … ရှီး” ကျွန်မလေ … မျက်စိမှိတ်ထားရာကနေ … အတင်းပဲ ထကြည့်ပါတယ် … မောင် မကောင်းဘူး … ရက်စက်တယ် … ကျွန်မပန်းလေးထဲက … ဆွဲထုတ်လာတဲ့ မောင့်ဒုတ် … နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး … ကျွန်မ လက်ကောက်ဝတ်နီးပါးလောက်ရှိတာကြီးကို … မောင် ထည့်ရက်တယ် … ဟင့် … ဒီလောက်ကြပ်နေတဲ့ … ပန်းလေးထဲ ထည့်တော့ … အထဲမှာ ကွဲ ပြဲကုန်ပြီလား မသိပါဘူး … ဟင် … မောင့်ဒုတ်မှာ … သွေးတွေနဲ့ …
“အို … သွေးတွေနဲ့ … မောင် “ “အပျိုမြှေးပေါက်သွားတာ … မ ရဲ့ … စိတ်မပူပါနဲ့ … အစမို့ နည်းနည်းလေး နာတာပါ …” “သွားပါ … မောင် အရမ်း ရက်စက်တယ် … ဒီမှာ သွေးတွေ ထွက်နေပြီ …” ပန်းလေးထဲက … အရည်တွေနဲ့ အတူတူ သွေးတွေ ထွက်လာပါတယ် … “လာပါ … မ ရယ် … စိတ်မဆိုးရ ဘူးနော် … ဆက်ချစ်ချင်တယ် မရယ် … လာပါ …” “အို … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း …” မောင် အရမ်းဆိုးတယ် … ကျွန်မကိုလေ … အတင်း တွန်းချပြီး … ပန်းလေးထဲကို … မောင့်ဒုတ်ကြီးနဲ့ … တေ့ပြီး … ဆောင့်ချပစ်လိုက်ပါတယ် … “အား … နာတယ် … နာတယ် … ဟင့်” မောင်က … အတင်းပဲ … ကျွန်မကို မညှာဘူး … စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေတဲ့ … ပန်းလေးက … ဒေါသတကြီး … မောင့်ဒုတ်ကို … ညှစ်ပစ်လိုက်တယ် … ကဲ … မှတ်ပြီလား … မောင်ရေ … “ဟာ … ဟာ … အရမ်းညှစ်တယ် … မရယ် … အရမ်းညှစ်ထားတယ် …” ဒီတစ်ခါ … အော်ရတာက … မောင်လေ … ကောင်းတယ် မှတ်ပြီလား … သူများကို … မ ညှာမတာ … သွေးထွက်အောင်လုပ်တဲ့ မောင် …
ကျွန်မလည်း … အရမ်းနာတာပဲ … နာတာပျောက်သွားအောင် … အတင်းညှစ်ထားတော့ … မောင် လုပ်မရ တော့ဘူးပေါ့ … မောင်လေ … ကျွန်မ ဒီလို ညှစ်နေတာကို … အရမ်းဖီးတွေ့နေတယ်ထင်ပါရဲ့ … အတင်းပဲ … ဆွဲထုတ်တယ် … ကျွန်မက အတင်းညှစ်ထား တယ် … ဟင့် … ဟင့် … ပန်းလေးထဲက … မောင့်ဒုတ်ကြီးက … ပြန်ထွက်သွားပြီ … ရင်ထဲမှာ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … ချက်ခြင်းပဲ … မောင် ပြန်ထည့် တယ် … ဟာ … အား အား … ဆီးခုံနှစ်ခု … ဂဟေဆက်သွားတဲ့အထိ … မောင်ထိုးထည့်တယ် … မောင့်ဒုတ်က ရှည်လိုက်တာရှင် … ကျွန်မ သားအိမ်ကို … ဒိန်းကနဲ လာဆောင့်တဲ့အထိ … ထည့်ပစ်လိုက်တော့ … မျက်လုံးတွေ ပြာသွားတာပဲ … ဒီလိုနဲ့ … အဝင်အထွက်တွေက … တဖြေးဖြေး မြန်လာပါတယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … အပျိုမြှေးပေါက်သွားတဲ့ နာကျင်ခံစားမှုတွေ … ပျောက်သွားပြီး … ကျွန်မစိတ်တွေ … ချစ်ရမက်ခိုး ဝေနေပါတယ် … မောင့်ဒုတ် ဝင် လာရင် … ခါးလေးကို ယမ်းခါလိုက် … ပြန်ထွက်ခါနီး … ညှစ်ထားလိုက်နဲ့ … ဖီလင်တွေ တက်လာပါတယ် … အော် … ဒါကြောင့်လည်း … အိမ်ထောင်ပြုကြ တာကိုး … ဒီအရသာက … ဘာနဲ့မှကိုမတူတာပဲရှင် … မောင်လေ … ကျွန်မ ဂျိုင်းနှစ်ဖက်အောက်ကို … လက်ထည့်လိုက်ပါတယ် … လျှိုပြီး … ပခုံးနှစ်ဖက် ကို … အတင်းဆုပ်ပြီး … ဖိဆောင့်ပစ်လိုက် တယ် …
“ဗြစ် … ဗြစ် … စွတ် … စွိ … အင့် … အီး … ဟင့် … ဟင့် … အား … အား “ အရမ်းပဲရှင် … နားထင်တွေ ပူထူသွားအောင် … ဆက်တိုက် … ဆောင့်ပစ်နေ တယ် … မောင်လေ … အတင်းပဲ ဆောင့်တော့ … ကျွန်မ ရုန်းမရတော့ဘူး … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … ငြီးသံလေးက … အခန်းထဲမှာ ကျယ်လာတော့ … အတင်း နှုတ်ခမ်းကို … ကိုက်လိုက်ပြီး … အောက်က … တင်သားကို … ကော့ပစ်လိုက်တယ် … ဆောင့်ပေတော့ … မောင်ရေ … ဆောင့် … မောင်ချစ်သမျှ … တို့ လိုက်လျောမယ် … မောင်ချစ်လို့ အသက်ထွက်ရင်လည်း ထွက်ပါစေတော့ … မတတ်နိုင်တော့ဘူး … မောင့် ဆောင့်ချက်တွေက … မှန်မှန်နဲ့ အားပါတော့ … နည်းနည်းတော့ အောင့်တယ်ရှင့် … မောင့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းတွေကြောင့် … မွေ့ယာထူထူပေါ်က … ပြန်ကန်ထွက်လာတဲ့ ကျွန်မတင်သားတွေကို … မွေ့ယာထဲ တင်ပါးကြီး မြုပ်သွားအောင် ဆောင့်ချလိုက်နဲ့ … မောင်အချစ်ကြမ်းနေပါတယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … နာနေပေ မယ့် … မောင်ချစ်တာ အရမ်းကောင်းတယ် … အီစိမ့်နေအောင် … ကောင်းတဲ့ မောင့်ဆောင့်ချက်တွေအောက်မှာ … ကျွန်မပန်းလေး … ကွဲချင်ကွဲပလေ့စေ တော့ရှင် … မောင်ဆောင့်တာ ပိုပြီး ထိအောင် … အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးနေမိတယ် … ကော့ပေးတော့လေ … မောင့်ဆောင့်ချက်တွေက ပိုပြီးထိ တယ်ရှင့် … ဒါပေမယ့် ကျေနပ်ပါတယ် … နာပေမယ့် အရမ်းကောင်းတော့ … ခြေထောက်တွေကို … လေထဲမှာ ဟိုကန်ဒီကန် ကန်မိပါတယ် … နောက်ဆုံး သုံးချက်လောက်မှာ … မခံနိုင်တော့ဘူးရှင့် … အဝင်အထွက်ကြမ်းနေတဲ့ … မောင့်ဒုတ်ကြီး … တုံ့ကနဲ ဖြစ်သွားအောင် … ညှစ်ပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်မလေ … အရမ်းထန်နေတော့ … ခါးလေးကိုပါ လိမ်ပစ်လိုက်တယ် …
“အား … ဟင့် … ဟင့် … ရှီး … မောင် … မောင် “ ကျွန်မလေ … မောင့်နာမည်ကို အတင်းခေါ်ရင်း … ပန်းလေးထဲက … အရမ်းယားလာပြီး … ပြွတ်ကနဲ … ချစ်ဝတ်ရည်တွေ ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … ကာမအရသာရဲ့ အဆုံးသတ် ခံစားမှုက … ကျွန်မရင်တွေ တငြိမ့်ငြိမ့် ပါပဲရှင် … မောင့်ကို … အတင်းဖက်ထားရင်း … မော့ကြည့်လိုက်တော့လေ … မောင့်မျက်နှာမှာ ချွေးတွေ ပြန်နေတယ် … အို … မောင်ရယ် … ချွေးထွက်ရ လောက်အောင် … ချစ်ရသလားရှင် … ကျွန်မလေ … မောင့် မျက်နှာပေါ်က … ချွေးလေးတွေကို … သုတ်ပေးလိုက်ပြီး … “မောင်ရယ် … အရမ်းကောင်း တယ်ကွယ် …” “ဟုတ်တယ် … မရယ် … အရမ်းကောင်းတယ် … ဒါပေမယ့် … မောင် မပြီးသေးဘူး …” “အို …” ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင် … ကျွန်မ အရည်တွေ ထွက်တာ ခဏခဏရှင့် … မောင်ကတော့ ပြီးသေးဘူးတဲ့ … “မောင့် … အရမ်းမောနေရင် … ခဏလောက်နားပါလားကွယ်” “ဟင့်အင်း … မ ရဲ့ … အဖုတ်က … အရမ်းချလို့ကောင်းတယ် …” “အို … မောင်ကလည်း …” ကျွန်မလေ … မောင့်ကို သိပ်ချစ်ပေမယ့် … ဒီလိုမျိုး စကားလုံးကြမ်းကြမ်း တွေကိုတော့ နားရှက်တယ်ရှင့် … ဒါပေမယ့် … မောင် မပြီးသေးတာကို … အားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ်ရှင့် … မောင့်ကိုလည်း … ကျွန်မလို … ကျေနပ် နှစ်သိမ့်မှုပေးချင်တယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို သိပ်ချစ်သွားတော့ … အတင်းပဲ အောက်ကနေ … ကော့ကော့ပေးတယ် … ညှစ်ပေးတယ် … မောင်လေ … အရမ်းထန်လာတော့ … ကျွန်မ ခါးလေးကို အတင်းမပြီး … ပန်းလေးထဲကို … အတင်းဆောင့်ချနေတော့တာပဲရှင် … ကျွန်မလေ … စက်သေနတ်ပစ်သလို မောင့်အချစ်တွေကြောင့် … ဗလုံးဗထွေးနဲ့ … ငြီးတွားနေပါတယ် … “အား … ဟာ … ဟာ … မ … မောင် … ပြီးတော့မယ် … ပြီးတော့မယ် …” အဝင်အထွက်တွေက … မြန်လွန်းလို့ … ကျွန်မ ပန်းလေးကလည်း … မညှစ်နိုင်တော့ဘူးရှင် … ခါးလေးကို ကော့ထားတော့ … ပန်းလေးက … ပိုဟပေးနေ သလိုနဲ့ … အရည်တွေ ရွှဲနေတော့ … မောင် ဝင်သမျှ ထွက်သမျှ … အဆင်ချောနေတာပေါ့ရှင် … မောင်လေ … နောက်ဆုံး အချက်မှာ … အတင်းပဲ … ဆောင့်ချလိုက်တာ … ကျွန်မ သားအိမ်ထဲထိ … သူ့ထိပ်ဖျား ဝင်ချလာပါတယ် … ဖွတ်ကနဲ … ဝင်သွားတဲ့ … ခံစားချက်က … ဒီတသက်မမေ့နိုင်တော့ပါဘူး …
“အား … နာတယ် … မောင် … မောင် …” “ရှီး … ပြီးပြီ … မရေ … ပြီးပြီ … ရှီး … ကောင်းလိုက်တာ မရယ် … ကောင်းလိုက်တာ” ဟွန့် … မောင်လေ … တ ဇတ်ဇတ်နဲ့ တကိုယ်လုံးတုန်ပြီး … အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် … အားရလိုက်တာရှင် … မောင်လေ … သူ့ဒုတ်ထဲက … ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ … အရည်တွေက … မီးသတ်ပိုက်လိုပဲ … ပြင်းလိုက်တာ … ပြွတ်ကနဲ … ကျွန်မ ပန်းလေးကို .. နွေးသွားအောင် … ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တာ … ကောင်းလိုက်တာ ရှင် ကောင်းလိုက်တာ … မောင်လေ … အရည်တွေလည်း ထွက်ပြီးသွားရော … ကျွန်မဘေးမှာ … လှဲချပြီး … မောနေတယ် … ကျွန်မလေ … မောင့် လက်မောင်းပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးပြီး … မောင့်ကို ဖက်ထားရင်း … “မောင် … အရမ်းမောနေပြီမှတ်လားဟင်” “မောတော့ မောတာပေါ့ … မ ရယ် … ဒါပေမယ့် မမောဘူး” “တို့ကို … ချစ်တယ်မှတ်လားဟင်” “ချစ်တာပေါ့ မရယ် … ချစ်တာပေါ့” “တို့လည်း မောင့်ကို … အရမ်းချစ်တယ်ကွယ် … မောင်က ဆိုး တယ်နော်” “အန် … ဘာကို ဆိုးတာလဲ မကလဲ” “တို့ကို သွေးထွက်အောင် … လုပ်တယ် အရမ်းနာအောင်လုပ်တယ်” “ဟား ဟား … မကလည်း ကလေး ကျနေတာပဲ … မက အပျိုလေးလေ … ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ သွေးထွက်မှာပေါ့ … အရမ်းနာသွားလားဟင်” “နာတာပေါ့ မောင်ရယ် … အသည်းခိုက်အောင် နာတာပေါ့” “နာပြီးတော့ … ကောင်းတယ်မှတ်လားဟင်” “ပြောမပြတတ်အောင် … အရမ်းကောင်းတယ် … ရွှတ်” ကျွန်မလေ … မောင့်ကို အရမ်းချစ်မိ သွားလို့ အသဲယားလွန်းလို့ … အနမ်းတပွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် … မောင်လည်း ကျွန်မကို ပြန်နမ်းပါတယ် … ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင်ပန်းလေး မောင်ခူးသွားပြီး နောက် … နဲနဲတော့ ရဲလာပါတယ် … သိပ်ချစ်ရတဲ့ မောင်နဲ့ ချစ်ရတာ သိပ်မဝသေးပါဘူး … တခါမှ မကြုံဖူးသေးတဲ့ ကာမအရသာကို … ကျကျနန ခံစား လိုက်ရတော့ … ရင်ထဲမှာ ဆန္ဒတွေက ပွက်ပွက်ဆူနေပါတယ် … မောင် ချစ်ချင်ရင် ဆက်ချစ်လို့ရပါသေးတယ် … မောင်ရယ် …
“မ … ထပ်ချစ်ချင်သေးတယ်ဗျာ” “အို … မောင်နော်” “မ … အဖုတ်က … အရမ်းကြပ်တယ်နော်” “ဟေ့အေးနော် … မောင် … ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ ပြောနဲ့ …” “မရဘူးကွာ … မနဲ့ မောင်က … လင်မယားတွေ ဖြစ်နေပြီပဲဟာကို” “ဟေ့အေးနော် … တို့ နားရှက်တယ် …” “မရှက်ပါနဲ့ မ ရယ် … မ အဖုတ်လေးကို … ဖြဲပေးထားနော်” “ဟေ့အေး … ဟေ့အေး” ကျွန်မလေ … မောင့်အချစ်ကြမ်းကြမ်းတွေ လက်ခံပြီးပြီဆိုပေမယ့် … အဲဒီလို လုပ်ပေးရမှာတော့ ရှက်မိပါ တယ် … မောင့်ကို ချစ်တော့လေ … ရှက်ပေမယ့် … ပေါင်လေးကိုသာ ကားပေးလိုက်တယ် … မောင်ကလည်း ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး … မောင်လေ … အရည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ ကျွန်မပန်းလေးကို … မတ်မတ်မောမောကြည့်ပြီး … မောင့်ဟာကြီးနဲ့ … တေ့လိုက်ပါတယ် … “ဟာ” ငြီးသံလေးကို မတားဆီးနိုင်ခင် … ပါးစပ်ဖျားက ထွက်သွားပါတယ် … မောင့်ဟာက … ကြီးကို ကြီးတာရှင့် … တခါအချစ်ခံပြီးပြီဆိုပေမယ့် … ကျွန်မပန်းလေးက … ကျဉ်းကြပ်နေဆဲ ပါ … မောင် ထိုးထည့်လိုက်တော့ … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … အတင်းကိုက်ထားရင်း … မောင့်ကို တအားဖက်ထားလိုက်တယ် … နာလိုက်တာ မောင် ရယ် … အရည်တွေကြောင့် … အဝင်ချောပေမယ့် … စပ်ဖျင်းဖျင်း ဒဏ်ရာက … နာလိုက်တာရှင် … မောင်လေ … ကျွန်မကို … နှစ်သိမ့်တဲ့ အနေနဲ့ … အနမ်း တွေ လျှောက်ပေးနေတယ် … တော်ပါ မောင်ရယ် … လူကို ညာပြီး … အရမ်းလုပ်တယ် ….
ဟင့် … ကျွန်မလေ .. ပေါင်တွေကို … အတင်းကားပေးလိုက်ပါ တယ် … မဆန့်မပြဲ ဝင်ချလာတဲ့ … မောင့်ပစ္စည်းကို … မခံနိုင်ဘူးရှင့် … မောင်က တအားစိတ်ထန်နေပြီနဲ့ တူပါရဲ့ … ကျွန်မကို ဖက်ထားရာကနေ … နည်း နည်းထပြီး … ကျွန်မ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို … ပိုကားပစ်လိုက်ပြီး … ဖိချလိုက်ပါတယ် … “ဟာ … နာတယ် … မောင် … မောင်” ကျွန်မပုံစံက … ပက်လက် ကလေး … ဖြစ်နေပြီး … ခြေထောက်တွေက … ဖားလေးလို ကားကားလေး ဖြစ်နေပါတယ် … ကျွန်မဖင်သားကြီးတွေက … အတင်းကော့ပေးနေသလိုဖြစ် နေတော့ … ပိုထိတာပေါ့ရှင် … အစ တချက် နှစ်ချက် … ဖြေးဖြေးလုပ်ပေမယ့် … နောက်ပိုင်း … မောင် ကြမ်းတော့တာပါပဲ … သိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ အနီးကပ် ဆောင့်ချက်တွေက … ကျွန်မ စိတ်တွေ ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်အောင် … ပြင်းထန်လွန်းပါတယ်ရှင် … မောင့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက … ကျွန်မ ပန်းလေးကို နာကျင်စေတယ်ဆိုပေမယ့် … နာကျင်ခြင်းနဲ့ အတူ ခံစားရတဲ့ … အရသာလေးကို … တဖြေးဖြေးနဲ့ နှစ်သက်လာပါတယ် … မောင့်ရဲ့ အနီးကပ်ဆောင့်ချက် တွေကို … ကျွန်မလေ … ကောင်းလွန်းလို့ အောက်ကနေ ပြန်ပြန်ပြီး ပင့်တင်ပေးပစ်လိုက်တယ် … မောင်လည်း ကျွန်မလို ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန်လာလို့ နေမှာပေါ့ … ပါးစပ်ထဲက ငြီးတွားသံတွေ ထွက်လာပါတယ် … တို့လုပ်ပေးတာ … ကောင်းရဲ့လား … မောင်ရယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်လည်ပင်းကို အောက်ကနေ အတင်းဖက်ထားရင်း … ကျွန်မတင်ဆိုင်ကြီးတွေကို … မွေ့ယာနဲ့ လွတ်တဲ့အထိ … ကော့ကော့ပေးလိုက်တယ် … မောင်လေ … သဘောတွေ ကျလွန်းလို့ … အားကုန်ဆောင့်တော့တာပဲ …
“အို … ဟာ …. ဟာ” “ဟင့် … ထိတယ် … မောင်ရယ် … အရမ်းပဲ” မောင် နည်းနည်းမောလာလို့ ထင်ပါရဲ့ … ကျွန်မကိုယ်ပေါ်ကို နည်းနည်း ပိကျလာပြီး … ဆက်တိုက်ဆောင့်ပါတယ် … မောင့်ရဲ့ ဒုတ်က … ကျွန်မပန်းဖူးလေးကို … ပွတ်ပွတ်ဆွဲသွားတာများရှင် … ကောင်းလိုက်တာ ပြောမနေပါနဲ့ … အသဲထဲမှာ ပြောင်းဆန်သွားတာပဲ … မောင်လေ … အားတက်လာလို့ထင်ပါရဲ့ … ကျွန်မ ရင်နှစ်မွှာကို … အတင်းနယ်တော့တာပဲ … “အာ … ဟာ …. ဟာ” “နာတယ် … မောင်ရယ် …” “တော်ပါတော့ … ဟင့် … ဟင့် …” ပါးစပ်က တော်ပါတော့ဆိုပေမယ့် … အောက်ကနေ … အတင်းကော့ကော့ပေးနေတာ … ကောင်း လွန်းလို့ပါရှင် … မောင် … ကျွန်မ ရင်သားထိပ်ဖျားလေးကို … ဖိပြီး ချေတော့ … မခံနိုင်တော့ဘူး … စိတ်တွေ အရမ်းထန်လာပြီး … သွေးတွေက ပွက်ပွက်ဆူ မတတ် ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ … ကျွန်မလေ … အတင်းအော်ရင်း … ဘယ်လိုဘယ်လို … မောင့်ပေါ်ကို ရောက်သွားမှန်းမသိပါဘူး … မောင် တအားလည်တယ် … ကျွန်မကိုယ်လေးကို … အတင်းဖက်ထားပြီး … ဆွဲလှည့်လိုက်တော့ … မောင်က အောက်မှာ … ကျွန်မက အပေါ်မှာ … ရှက်လိုက်တာရှင် … ပထမဆုံး စ ချစ်ကြတဲ့နေ့မှာ … မောင်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မကို ချစ်နေတော့တာပဲ … ချစ်ပါမောင်ရယ် ချစ်ပါ … မောင် ချစ်သမျှကို လိုက်လျောဖို့ အသင့်ပါပဲ … မောင့်ပေါ် မှာ ကျွန်မ ရောက်တော့လေ … ခံစားချက်က တမျိုးကြီးပဲရှင့် … အောက်ကနေ ထောင်ပြီး တင်းမာနေတဲ့ မောင့်ဒုတ်ကြီးက … ပိုကြီးလာတယ်လို့ ခံစားရပါ တယ် … အတင်းကားထားပေမယ့် … မရဘူးရှင့် …
ကျွန်မပန်းလေးက … ပိုကြပ်သွားလိုနဲ့ … မောင့်ဟာကို အတင်းညှစ်ထားပစ်လိုက်တယ် … မောင့်ရင်ခွင် ထဲမှာ … လှဲပြီး မှီနေတဲ့ ကျွန်မကို … မတ်မတ်လေးဖြစ်သွားအောင် … မောင် တွန်းလိုက်ပြီး … ခါးကို ကိုက်ကာ … ဖြေးဖြေးချင်းဆောင့်နည်းလေး သင်ပေး ပါတယ် … ကျွန်မ သဘောပေါက်ပါတယ် … မောင့်အကြိုက်လိုက်လျောဖို့ ဖြေးဖြေးလေး … ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ် … ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်း လိုက်တာ … အောက်ကနေ … ဒုံးပျံလို ထောင်မတ်နေတဲ့ မောင့်ဒုတ်ကို … အပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ရတာ သိပ်တော့ မသက်သာလှဘူးရှင့် … တချက်တ ချက် … ကျွန်မ သားအိမ်ကို လာလာဆောင့်တာ အောင့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် … ဒါပေမယ့် ကောင်းလွန်းလို့ … သိပ်ကြာကြာ မဆောင့်နိုင်ပါဘူး … စိတ် ထင် လေးငါးဆယ်ခါလောက်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် … မရတော့ဘူး … ပန်းလေးထဲက … ဝတ်ရည်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ အတူ … ကျွန်မ အော်ငြီးပြီး … အရည်တွေ ပြွတ်ကနဲ ထွက်သွားပါတယ် … ကျွန်မလေ … တကိုယ်လုံး အားယုတ်သွားသလို ဖြစ်ပြီး … နည်းနည်းတော့ အိပ်ချင်လာပါတယ် … မောင် ချစ်လို့ မဝသေး ဘူးဆိုတာ … ကျွန်မသိပါတယ် … မောင့်ကို ကျွန်မ ခေါင်းနဲ့ ဝှေ့ပြီး … မှီအိပ်နေရင်း … အပေါ်ကနေ … ဖြေးဖြေးလေး ဆောင့်ပေးပါတယ် … ကောင်းလိုက် တာရှင် … ပန်းလေးထဲကို ဝင်နေတဲ့ မောင့်ဒုတ်က … သံချောင်းကျနေတာပဲရှင် … မာပြီးတောင့်တင်းနေတဲ့ … မောင့်ဒုတ်က ကျွန်မ ပန်းဖူးလေးကို ခပ်ပြင်း ပြင်းပွတ်ဆွဲတာများ … တချက်တချက် ဆွေမျိုးမေ့သွားလောက်တယ် … မောင်လေ … ကျွန်မခါးလေးကို ကိုင်ပြီး … စကောဝိုင်းလို မွှေခိုင်းတယ် … စိတ်ချ မောင်ရေ … မောင့်အကြိုက် … ကျွန်မဖင်လေးကို အနောက်ကို အစွမ်းကုန်ကော့ထားရင်း … စကောဝိုင်းလို မွှေပေးလိုက်တယ် … အား …. ဟာ … ကောင်း လိုက်တာ မောင်ရယ် … တို့ သိပ်မလုပ်တတ်သေးပေမယ့် … မောင်ကြိုက်မယ် ထင်ပါတယ် … ကြပ်စီးနေတဲ့ ကျွန်မပန်းလေးထဲမှာ … မောင့်ဒုတ်က … အသားနုလေးတွေကို … အီစိမ့်လောက်အောင် … ပွတ်ပွတ်ဆွဲနေတာ … ကောင်းလိုက်တာရှင် …
ကျွန်မ စိတ်တွေ ထိန်းမရအောင် … ကောင်းလွန်းလို့ … မောင့်အပေါ်မှာ … ခပ်ပြင်းပြင်း အဆက်မပြတ်ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ် … မောင်လေ … ရေနစ်တဲ့ လူလိုပဲ … အတင်း … ခေါင်းအုံးကို ဆွဲလိုက် … မွေ့ယာခင်းကို ဆွဲလိုက်နဲ့ … ဆောက်တည်ရာမရဘူး ဖြစ်နေတယ် … ဟား ဟား … မှတ်ပြီလား မောင် … သူ့ အလှည့်တုန်းက … အသက်ရှူလို့ မရအောင် … လုပ်ခဲ့တာလေ … အခု တို့အလှည့်ရောက်တော့ … မောင် အသက်ရှူမဝတော့ဘူး မှတ်လား … ကျွန်မလေ … မြင်းစီးသလို … ဖင်ကို အနောက်ကို ကော့ထားလိုက် … သိမ့်ကနဲ အပေါ်ကို ရောက်သွားလိုက် … ပြန်ပြုတ်ကျလာလိုက်နဲ့ … ပြောမပြတတ်အောင် … ရမက်ခိုးတွေ ဝေနေပါတယ် … ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မလေ … ဘာမှ မသိချင်တော့ဘူး … မောင့်ကို … အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်က … မောင့်ဒုတ်ကို … ညှစ်ထားတဲ့ ပန်းလေးကို … အဆုံးရောက်တဲ့အထိ … ဖင်လေးကို ပြန်ကြွပြီး … ပစ်ထိုင်ပစ်လိုက်တယ် … အားကနဲ ကျွန်မလေ နာသွားတယ်ရှင့် … ဒါပေ မယ့် … အရမ်းကောင်းလွန်းတော့ … မောင့်ဟာကို အဆုံးထိ ထုတ်လိုက် … အဆုံးနားရောက်ခါနီးရင် … သိမ့်ကနဲ ထိုင်ချပစ်လိုက်နဲ့ … မောင်တောင် … အိပ် မနေနိုင်တော့ဘူး … ငေါက်ကနဲ ထထိုင်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်နဲ့ တူတယ် … ဟင်း ဟင်း … ဘယ်ရမလဲရှင် … ကျွန်မ … မောင့် … ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ ဖိ ထားပြီး … ဆက်တိုက် … ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ် … ဒီနေရာမှာ ကျွန်မ တင်ဆိုင်ကြီးတွေက အရမ်းအသုံးဝင်တာပဲရှင် … ကျွန်မသာ တင်သားသေးသေး လေးဆို … မောင်အားရပါ့မလား မသိပါဘူး …. အခုတော့ … မောင့်အပေါ်ကနေ … သိမ့်ကနဲ ဆောင့်ဆောင့်ချပစ်လိုက်တာ … မောင်အရမ်းသဘောကျမယ် ထင်ပါတယ် … မောင့်ဒုတ်ကို ညှစ်ထားရင်း … ပြန်ကြွလိုက် … စိတ်ကိုလွှတ်ပေးပြီး … သိမ့်ကနဲ ဆောင့်ချလိုက် … အောက်က မောင်က ပင့်တင်ပေးချိန်နဲ့ အံကိုက် … ဒုန်းကနဲ အဆောင့်ခံရတော့ … ကျွန်မစိတ်တွေ … လေထဲ ဝဲပျံနေပါတယ် … ကျွန်မလေ … ကျွန်မ နာကျင်နေပေမယ့် … အောက်ကနေ တိုးဝင် လာတဲ့ မောင့်ဒုတ်ကို … ယမ်းခါသွားအောင် … တင်သားဆိုင်တွေကို စကောဝိုင်းလို မွှေပေးလိုက်နဲ့ ကျွန်မ စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ရင်း … အရည်တွေ က ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ အန်ကျလာပါတယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို အရမ်းဆောင့်ပေးတော့ … မောလိုက်တာရှင် … နည်းနည်းကြာတော့ … ကျွန်မ မလှုပ် နိုင်တော့ဘူး … အားမရှိတော့ဘူးရှင့် …
“မောနေပြီလား … မရယ်” “မောတာပေါ့ … မောင်ရယ် … လှုပ်တောင် မလှုပ်ချင်တော့ဘူး” မောင့်ရင်ခွင်ထဲမှာ လှဲချလိုက်ပြီး … ကျွန်မလေ … မောင့်ရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို နားထောင်ကြည့်လိုက်တယ် … တဒိန်းဒိန်းနဲ့ … မောင့်ရင်ခုန်သံတွေက အကျယ်ကြီးပဲ … မောင်လည်း မောနေပြီနဲ့ တူတယ် … ဟင်း ဟင်း … ကျွန်မကြောင့် မောင့်ရင်တွေ တအားခုန်တယ် ဆိုတာ သိသာပါတယ် … ကျွန်မ ကျေနပ်သွားတယ် … မောင့်ကို ချစ်ခွင့်ပေးလိုက်တာကို … ဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး … ကျေနပ်စွာနဲ့ … မတွန့်တိုတော့ဘူးကွယ် … “မောရင် … အောက်မှာ ပြန်နေနော် … မောင် အပေါ်က ချစ်မယ်” “အို … မောင့် …” မောင်လေ … ကျွန်မကို အတင်းဖက်ထားရင်း … ကိုယ်ကိုလှည့်လိုက်တော့ … ကျွန်မက မောင့်အောက်ကို ပြန်ရောက်သွားတယ် … မောင့် ဒုတ်ကြီးက … ကျွန်မပန်းလေးထဲမှာ … ဝက်အူရစ်လှည့်လိုက်သလိုပါပဲ … နာလိုက်တာရှင် … အပျိုမြှေးလေး ကွဲပြဲပြီး စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေတဲ့ အထဲ … ဒီလိုမျိုး ထိုးမွှေ လိုက်တော့ … နာလိုက်တာရှင် … နာလွန်းလို့ ကျွန်မ တကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားရင်း … ကျွန်မ တင်ဆုံကြီးက … အပေါ်ကို အတင်းကြွပစ်လိုက်ပါတယ် … “အား … နာတယ်နော် … မောင့် …” မောင်လေ … ကျွန်မ ဒီလို အော်လေ … ပိုလုပ်လေပဲ … သူ့ဒုတ်ကို … အတင်းဆွဲထုတ်ပြီး … အတင်းပြန်ထည့်တယ် … နာကျင်လွန်းလို့ ကျွန်မ ပန်းလေးကို … အတင်းညှစ်ထားတဲ့ကြားက … မောင့်ဒုတ်က … တထစ်ထစ်နဲ့ ပြန်ဝင်လာတယ် … အောင်မလေး မောင်ရယ် … နာ လိုက်တာနော် … ဟင့် … ရက်စက်လိုက်တာ မောင်ရယ် … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို အတင်းဖက်ထားတော့ … မောင် အသွင်းအထုတ်လုပ်နေတာတွေကို … ရပ်လိုက်တယ် … နာကျင်လွန်းပေမယ့် … မောင်ရပ်လိုက်တော့လည်း … ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ လက်မခံချင်ပါဘူး … မောင့်ကိုလေ … ဆက်လုပ်စေချင်ပါတယ် … မောင် ဘာလုပ်မလို့လဲဟင် … ကျွန်မလေ … မောင့်ကို မော့ကြည့်တော့ … မောင်က ဘေးနားက … ခေါင်းအုံးတလုံးကို … ကျွန်မ ဖင်အောက်ထဲ ထည့် လိုက်တယ် … ကျွန်မဖင်တွေက … အတင်းထောင်ပေးသလို ဖြစ်သွားတယ်ရှင့် … ပန်းလေးက အတင်းကော့ပေးသလို ဖြစ်နေရင်း … မောင့်ဒုတ်က … အတွင်းသား နက်နက်ကို … ပိုထိလာသလို ခံစားရပါတယ် … သေပြီ မောင်ရေ … တို့တော့ … သေပါပြီကွယ် …
“အား … မောင်နော် … ဖြေးဖြေးလုပ်နော် … ဟင့်” “အရမ်းထိတယ် … မောင်ရယ် … အရမ်းနာတယ် … ဟာ …. ဟာ …. အူး …. ဟင့် … ရှီး” ရမက် သံတွေ လျှံထွက်လာအောင် … မောင်လေ … အသွင်းအထုတ် … အထိုးအမြှုပ်လေးတွေ လုပ်ပေးတာ … အရမ်းကောင်းတယ်ရှင် … ကျွန်မကလည်း ကျွန်မ ပဲရှင် … ဖင်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးခံထားလို့ … ကော့ပေးထားသလို ဖြစ်နေတဲ့ကြားက … မနေနိုင်တော့ဘူးရှင် … ခြေဖဝါးကို မွေ့ယာပေါ်မှာ အားပြုပြီး … အတင်းကော့ကော့ပေးနေတယ် … မောင်ရယ် … ဘယ်လိုများ … တို့ကို ချစ်နေတာလဲကွယ် … ပန်းလေးထဲက … စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ယားလွန်းလို့ … မနေနိုင် တော့ဘူးကွယ် …“အို … အမေ့ … ဟာ …. ဟာ” “အရမ်းမကြမ်းနဲ့ … မောင်ရယ် “ “နာတယ်နော် … မောင့် …. ဟာ … ဟာ … ရှီး” “ဟာ … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … အဲဒီလို မမွှေနဲ့လေ … အား …. ရှီး” ချစ်တာကြမ်းလိုက်တာ မောင်ရယ် … မောင်လေ … ကျွန်မခါးကို ကိုင်ပြီး … အတင်း ဆောင့်တာ … မောင့် ရဲ့ အနီးကပ်ဆောင့်ချက်တွေက … ကျွန်မ မခံနိုင်တော့ဘူး … ရုန်းလို့လည်း မရတော့ … ခေါင်းကိုသာ အတင်းခါရင်း … မောင့်လက်မောင်းကို … အတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားရတော့ပါတယ်ရှင် … လုပ်ပါတော့ မောင်ရယ် … သေအောင်သာ လုပ်လိုက်တော့ … မောင်နော် … ခံစားချက်တွေ ရမက်မီးတွေက … ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေလို့ … ကျွန်မလေ … အရမ်းပဲ ငြီးတွားနေမိပါတယ် … မောင်ရဲ့ မျက်နှာကလည်း နီရဲတွတ်နေတာပဲ … ကြိုက်ရဲ့လားဟင် … မောင် …
“ဟာ … ရှီး” ကျွန်မ … မခံနိုင်တော့ဘူး … ထွက်တော့မယ် … ထွက်တော့မယ် … ပန်းလေးထဲက … တဆစ်ဆစ်နဲ့ … အတင်းညှစ်ထားရင်း … တရစ်ပြီး တ ရစ်တက်လာတဲ့ … ကာမစိတ်အပြင်းထန်ဆုံးအချိန်ကို … ဘယ်လိုမျိုးအဆုံးသတ်ရမှာလဲရှင် … မခံနိုင်တော့ဘူး မောင့် …. မောင့်ဟာကို … အတင်းညှစ်ထား ရင်း … ပြွတ်ကနဲ ထွက်သွားပါတယ် … မိနစ်ဝက်လောက် ကြာချိန်လေး အတွင်းမှာ … ကျွန်မစိတ်တွေ … နတ်ပြည်ကို ရောက်သွားသလိုပါပဲ … ငြိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ … ထူးကဲတဲ့ … ကာမအရသာက ကောင်းလိုက်တာရှင် … ကောင်းလိုက်တာ … ကောင်းလွန်းလို့ … တကိုယ်လုံးလည်း အားမရှိတော့ပါဘူး … မျက်စိဖွင့်ဖို့တောင် အားမရှိတော့လို့ … မှေးနေရင်း … မောင့်ရဲ့ အဆုံးသတ်ဆောင့်ချက်တွေကို … အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ပြီး … မောင့်ဒုတ်ကြီးထဲက … ပန်းထွက်လာတဲ့ … အရည်ပူပူတွေကို … ပန်းလေးထဲက တရစ်ရစ်စုပ်ယူရင်း … တညလုံး မောင်ချစ်သမျှ … အလိုလိုက်ရင်း … မိုးစင်စင်လင်းသွားပါ တော့တယ်ရှင် …
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အငျးယားလမျးက ခဈြဇာတျလမျး